ဆုချီးမြှင့် -related အပြုအမူတွေမှာ Dopamine အချက်ပြ (2013) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက်အချက်ပြ Dopamine (2013)
တပ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Circuits ။ 2013 အောက်တိုဘာ 11; 7: 152 ။
မော်လီကျူး Neurobiology ဓာတ်ခွဲခန်း, ဘဝကသိပ္ပံဦးစီးဌာန, ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်ဆိုးလ်, တောင်ကိုရီးယား။
Dopamine (DA) ကို mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်းမှတဆင့်စိတ်ခံစားမှုနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးအပြုအမူထိန်းညှိ။ DA mesolimbic neurotransmission အတွက်အပြောင်းအလဲများဆုလာဘ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်အမျိုးမျိုးသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ Psychostimulants, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်ဟာ mesolimbic DA စနစ်သိသိသာသာ Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အတူတူအာရုံခံဆဲလျ-တိကျတဲ့သို့မဟုတ်ဆားကစ်-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူ optogenetics နှင့် DREADDs သုံးပြီးမကြာမီကလေ့လာမှုများအကျိုးကိုဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် DA အချက်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးတက်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်မှုများအဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများ၏အာရုံကြောအလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်မယ့်နည်းလမ်းပေးထားပါပြီ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဆုလာဘ်-ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုခြုံငုံသုံးသပ်အတူမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုအတွက် DA စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အာရုံစိုက်။
dopamine, dopamine အဲဒီ receptor, မူးယစ်ဆေးစွဲ, အစားအစာဆုလာဘ်, ဆုလာဘ် circuit ကို
Dopamine (DA) ကဦးနှောက်ထဲမှာကြီးစိုး catecholamines neurotransmitter ဖြစ်ပြီး, substantia nigra (SN) နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် mesencephalic အာရုံခံခြင်းဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။ DA အာရုံခံအဆိုပါ striatum, cortex, limbic စနစ်နှင့် hypothalamus ဤအရေးပါနှင့်စီမံကိန်းအတွက်အစပြုတာဖြစ်တယ်။ ဤအလမ်းကြောင်းမှတဆင့် DA (ဥပမာညှိနှိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်နှင့်ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်အများအပြားဇီဝကမ္မ functions များ, အဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေသက်ရောက်သည်Hornykiewicz, 1966; Beaulieu နှင့် Gainetdinov, 2011; Tritsch နှင့် Sabatini, 2012).
ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက် DA စနစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိသောကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးအဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိစ္စများနေသောထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အစားအစာဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်အဝလွန်ခြင်းအတိုင်းဤတိုက်နယ်အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏လေးနက်သောအကျိုးဆက်များ, ၏အာရုံကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာ (စိတ်ခွန်အားနိုးအပြုအမူထိန်းညှိနှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏အဖှဲ့အစညျးအတှကျတာဝနျရှိသောစွဲလမ်းတ္ထုများမှအထပ်ထပ်ထိတွေ့ပြီးနောက်သပ္ပါယ်ပြောင်းလဲမှုများ DA mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာ level မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းယခုကောင်းစွာလက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်Nestler နှင့် Carlezon, 2006; Steketee နှင့် Kalivas, 2011). အဆိုပါ mesolimbic လမ်းကြောင်းဤပြုပြင်မွမ်းမံ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေကိုအလေးအနက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်ကြားမှဆက်လက်ရှိသည့်ရောဂါ relapsing တစ်နာတာရှည်ဖြစ်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်စဉ်းစားနေကြs ကို (သောမတ်စ် et al ။ , 2008).
မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက် limbic စနစ် glutamatergic နှင့် GABAergic Synaptic ကွန်ရက်များကိုလည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြောင့်ထိခိုက်, ဤစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု (Schmidt နဲ့ပီယပ်, 2010; Lüscherနှင့် Malenka, 2011) ။ ကို Considerable သက်သေအထောက်အထားယခု mesolimbic DA စနစ်၏သိသိသာသာ Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံအလွဲသုံးစားမှု psychostimulants နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမသာနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်သည်ဟုအကြံပြု; သို့သော်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများသွေးဆောင်သောယန္တရားကဒီဆားကစ်အတွက် Modify Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုတွေ့ရခဲသောဖြစ်နေဆဲ။ တကယ်တော့, DA ဆုလာဘ်အချက်ပြအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးပုံရသည်နှင့်လည်း (ဥပမာ, အမူအကျင့်သင်ယူမှုအတွက်ခန့်မှန်းအမှား coding တစ် DAergic တုံ့ပြန်မှုထုတ်ဖော်လေ့လာမှုများအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်, သင်ယူမှုနှင့်အေးစက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကိုပညာရှိ 2004; Schultz, 2007, 2012), ထို့ကြောင့် စနစ်တကျသည်ဤလှုံ့ဆော်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေကိုနားလည်ရန်တိုက်နယ်အဆင့်မှာဒဏ်ငွေခှဲစိတျများအတွက်လိုအပ်အကြံပြုခြင်း။ optogenetics နှင့်အာရုံခံဆဲလျ-တိကျတဲ့သို့မဟုတ်ဆားကစ်-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးသုံးပြီးမကြာမီကလေ့လာမှုများယခုအကျိုးကိုဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် DA အချက်ပြ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုခွင့်ပြုထားပါသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, ငါကိုကင်း-စွဲအပြုအမူတွေအပေါ်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဖြစ်ထိန်းညှိအတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုများ၏အခြေအနေတွင်အစားအစာဆုလာဘ်အပေါ်အချို့နှင့်အတူဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက် DA အချက်ပြ၏တိုတောင်းတဲ့အကျဉ်းချုပ်ပေးသွားမှာပါ ဤအအပြုအမူတွေ။
Dopamine ဒုတိယသံတမန်တို့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သီးခြားအချက်ပြလမ်းကြောင်း၏ activation သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်မှုမှဦးဆောင် activation အတူခုနစျပါး transmembrane ဒိုမိန်းမှာ G-ပရိုတိန်း coupled receptors များ၏မိသားစုပိုင်အမြှေးပါး receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ ယနေ့အထိ, DA receptors ငါးခုကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်ထံမှပုံတူမျိုးပွားပြီ။ သူတို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံပြီး, အုပ်စုနှစ်စုသို့အထွေထွေ subdivision လုပ်ထားပြီး: intracellular စခန်းအဆင့်ဆင့်ကိုလှုံ့ဆော်သော D1 ကဲ့သို့ receptors, D1 ပါဝင်သော (Dearry et al ။ , 1990; zhou et al ။ , 1990) နှင့် D5 (ယူဆပါတယ် et al ။ , 1991; Sunahara et al ။ , 1991), နှင့် D2 ပါဝင်သော intracellular စခန်းအဆင့်ဆင့်တားစီးသော D2 ကဲ့သို့ receptors, (Bunzow et al ။ , 1988; Dal Toso et al ။ , 1989), D3 (Sokoloff et al ။ , 1990), နှင့် D4 (ဗန် Tol et al ။ , 1991) receptors ။
D1 နှင့် D2 receptors အရှိဆုံးဖောဖောသီသီဦးနှောက်ထဲမှာ DA receptors ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အဆိုပါ D2 အဲဒီ receptor အတူတူပင်မျိုးဗီဇ (၏အခြားရွေးချယ်စရာ splicing ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နှစ်ခု isoforms ရှိပါတယ်Dal Toso et al ။ , 1989; Montmayeur et al ။ , 1991) ။ D2L နှင့် D2S အမည်ရှိဤရွေ့ကား isoforms, D29L ၏ putative တတိယ intracellular ကွင်းဆက်, တိကျတဲ့ဒုတိယတမန်တို့ကိုမှအဲဒီ receptor ၏ဤအတန်းအစားနားဆက်မှီရာတွင်တစ်အခန်းကဏ္ဍမှထင်ထားတဲ့ intracellular ဒိုမိန်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်2အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်ခုထည့်သွင်း မှလွဲ. တူညီကြသည်။
D2 receptors presynaptically ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုနေကြ, D2 အဲဒီ receptor immunoreactivity, mRNA, နှင့် midbrain တစ်လျှောက်လုံး DA အာရုံခံအတွက်ပစ္စုပ္ပန် binding က်ဘ်ဆိုက်များ (အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသSesack et al ။ , 1994), theVTA အတွက် D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်၏အနိမ့်အဆင့်ကိုအတူ SN ထက် (Haber et al ။ , 1995). ဤရွေ့ကား D2-type အမျိုးအစား autoreceptors အာရုံခံ excitabilit လြော့မှမသိ, somatodendritic autoreceptors ဖြစ်စေကိုယ်စားပြုy က (Lacey et al ။ , 1987, 1988; Chiodo နှင့် Kapatos, 1992), ဒါမှမဟုတ် terminal autoreceptors, which အများစု DA ပေါင်းစပ်နှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများလျော့နည်းကျဆင်း (Onali et al ။ , 1988; Pothos et al ။ , 1998), ဒါပေမယ့်လည်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-မှီခို DA လွှတ်ပေးရန်တားစီး (Cass နှင့် Zahniser, 1991; ကနေဒီ et al ။ , 1992; Congar et al ။ , 2002). ထို့ကြောင့်ဤ autoreceptors ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအခန်းကဏ္ဍခြုံငုံ DA neurotransmission ၏တားစီးနှင့်မော်ဂျူဖြစ်၏ သို့သော်သူက (ထိုသန္ဓေသားအဆင့်တွင်, အ D2-type အမျိုးအစား autoreceptor DA အာရုံခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတဲ့ function ရှိသည်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်ကင်မ် et al ။ , 2006, 2008; Yoon et al ။ , 2011; Yoon နဲ့ Baik, 2013) ။ ထို့ကြောင့်ဤ presynaptic D2 receptors တွေရဲ့ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးအခန်းကဏ္ဍနောက်ထပ်စူးစမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ထဲမှာ D3, D4 နှင့် D5 receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးသိသိသာသာပိုပြီးကန့်သတ်ခြင်းနှင့် D1 သို့မဟုတ် D2 ဖြစ်စေ receptors ၏ထက်အားနည်းသည်။
D1 ကဲ့သို့ receptors နှင့်အများအားဖြင့်ဆိုတဲ့ Heterologous ဆဲလ်လိုင်းများအတွက် DA receptors ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသုံးပြီးအဲဒီ receptor-ligand binding assay လေ့လာမှုများ၏အခြေခံပေါ်မှာအစီရင်ခံ D2 ကဲ့သို့ receptors များအတွက် DA ၏ဆှဖှေဲ့တချို့ကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ D2 အဲဒီ receptor DA အဘို့အနိမ့်ဆုံးဆှဖှေဲ့ရှိသည်ဖို့ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အတူဥပမာအားဖြင့်, D10 ကဲ့သို့ receptors, အ D100 ကဲ့သို့သောမိသားစုထက် DA များအတွက် 1-ခေါက် သာ. ကွီးမွတျဆှဖှေဲ့ဖို့ 1- ရှိသည်ထင်ရ (Beaulieu နှင့် Gainetdinov, 2011; Tritsch နှင့် Sabatini, 2012). ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှု "လုပ်သူများ" သို့မဟုတ် "phasic" သူတို့ပစ်ခတ်ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံပြီး, DA အာရုံခံ DA လွှတ်ပေးရန်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများရှိသည်နိုင်ကြောင်းပေးထားနှစ်ခု receptors များအတွက် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍအကြံပြု (ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007). ဒါဟာ DA အာရုံခံ၏အနိမ့်ကြိမ်နှုန်း, မမှန်ပစ်ခတ်ရန်လုပ်သူများ extracellular DA တစ်ဦးအနိမ့် Basal အဆင့်ကိုထုတ်ပေးကြောင်းအကြံပြုထားသည် (ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007), ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်သို့မဟုတ် "phasic" လှုပ်ရှားမှု afferent input ကိုအပေါ်လိုအပ်နေပြီလို့မှီခိုဖြစ်ပြီး, ဆုလာဘ်ညွှန်ပြခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ modulate မှ postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များသို့ပေးပို့သည့် function သက်ဆိုင်ရာ signal ကိုဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေစဉ် (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Schultz, 2007; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007). ထို့ကြောင့်, DA အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုစိမ်းဖြင့်အဆိုပါ DA အဆင့်အတွက်ယာယီတိုးမှဦးဆောင်အကျိုးကို circuitry ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ထင်နေသည် (Overton နှင့် Clark က, 1997; Schultz, 2007). အကျိုးဆက်အားနိမ့်-ဆှဖှေဲ့ DA အဲဒီ receptor အဖြစ်လူသိများသော D1 အဲဒီ receptor, ဦးစား DA အာရုံခံ၏ phasic ပြီးတော့ Activision နေတာကကမကထပြုခဲ့ DA ၏ယာယီမြင့်မားပြင်းအားများက activated ခံရဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် (goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2007). ဆနျ့ကငျြ, က DA အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ရှိသည်ဖို့လူသိများသည့် D2 ကဲ့သို့ receptors, လုပ်သူများ DA လွှတ်ပေးရန်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့် detect နိုင်သည်ကိုတွေးဆနေပါတယ် (goto et al ။ , 2007) ။ သို့သော်အဲဒီ receptor ဆှဖှေဲ့၏တိုင်းတာဆိုတဲ့ Heterologous DA receptors ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြကက်စကိတ်ဖို့အဲဒီ receptor ရဲ့နားချင်းဆက်မှီစွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်ကြဘူးထဲကနေတစ်ခုကို D2 ကဲ့သို့ receptors ဦးစား၏ Basal extracellular အဆင့်ဆင့်တို့က activated ရှိမရှိအခြဖို့ခက်ခဲသည် ligand binding assay အပေါ်အားကိုးကြောင်းပေးထား DA Vivo အတွက်။ ထို့ကြောင့်ဤနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော receptors DA အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံတွင်ပါဝင်ရန်ဘယ်လို elucidated ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲ Vivo အတွက်.
D1 AND D2 receptor ကကမကထပြုခဲ့အချက်ပြလမ်းကြောင်း
အဆိုပါ D1- နှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor အတန်းသူတို့ modulate အဆိုပါ intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းအတွက် function ကွာခြား။ အပါအဝင် D1 ကဲ့သို့ receptors, D1 နှင့် D5, အ, G ပရိုတင်းများပါဝင်သည်ကြောင်း heterotrimeric, G-ပရိုတိန်းမှ coupled နေကြသည်Gαs နှင့်Gαolfအတူ တိုးမြှင့် adenylyl cyclase (AC) လှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင် activation နှင့်သိသိ adenosine monophosphate (Camp) productio တိုးလာဎ။ ဒါကလမ်းကြောင်း variable ကိုအလွှာများနှင့်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်၏ induction အဖြစ်မြောက်မြားစွာအိုင်းလိုင်းများ၏မော်ဂျူ၏ phosphorylation အတွက်ရရှိလာတဲ့, ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) ၏ activation ဖြစ်ပေါ်သည်။ မတူတာကတော့, D2-class ကို DA receptors (D2, D3 နှင့် D4) Gαမှ coupled နေကြတယ်i နှင့်Gαo ပရိုတိန်းနှင့်ဎegatively, လျော့နည်းသွား PKA လှုပ်ရှားမှုထဲမှာရရှိလာတဲ့ K ကို၏ activation စခန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းညှိ+ ချန်နယ်များနှင့်မြောက်မြားစွာသည်အခြားအိုင်းလိုင်းများ၏မော်ဂျူ (Kebabian နှင့် Greengard, 1971; Kebabian နှင့် Calne, 1979; Missale et al ။ , 1998; Beaulieu နှင့် Gainetdinov, 2011).
PKA ၏အကောင်းဆုံးလေ့လာအလွှာတစ်ခုမှာ DA- သည်နှင့် Camp-စညျးမဉျြးစညျးကမျး phosphoprotein, အ striatum ၏ပရိုတိန်း phosphatase တစ်ခု inhibitor ဖြစ်ပြီး, အများစုအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့မစ္စတာ ~ 32,000 (DARPP-32), (MSNs) (Hemmings et al ။ , 1984a) ။ ဒါဟာ DARPP-32 striatal အာရုံခံအတွက် DA တုံ့ပြန်ဆဲလ်အချက်ပြ၏မော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သမာဓိအဖြစ်ပြုမူပုံရသည်။ ဒါဟာ PKA အားဖြင့် threonine 32 မှာ DARPP-34 ၏ phosphorylation ပရိုတိန်း phosphatase (PP32 ကျော် DARPP-1 ၏ inhibitory function ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ပြီး, Hemmings et al ။ , 1984a,b) ။ D1 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြအာရုံခံအတွက် D1 receptors ၏ဆွယူဆရတစ်ဦးအဖြစ် 32, threonine မှာ DARPP-2 ၏ phosphorylation လျော့ကျစေပါတယ်စဉ် D2 အဲဒီ receptor ခုနှစ်, PKA activation တုံ့ပြန် DARPP-32 တစ်ခုတိုးလာ phosphorylation အတွက် striatal အာရုံခံ, D34 အဲဒီ receptor ဆွရလဒ်များကိုဖော်ပြ လျှော့ PKA activation ၏အကျိုးဆက် (Bateup et al ။ , 2008) ။ အရာ, သို့သျောလညျး, တကစခန်း-လွတ်လပ်သောလမ်းကြောင်းကိုလည်း calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း phosphatase 2B (စ calcineurin အဖြစ်လူသိများ PP32B) က threonine 34 ၏ dephosphorylation ပေး DARPP-2 ၏ D2-receptor-mediated စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပုံ တိုးမြှင့် intracellular Ca အားဖြင့် activated2+အောက်ပါ D2 အဲဒီ receptor activation (Nishi et al ။ , 1997) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် DA DARPP-32 တစ် DA-ဗဟိုပြုအချက်ပြမော်လီကျူး၏ phosphorylation ၏ပြည်နယ်အပေါ်တစ်ဦး bidirectional ထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းခြုံငုံ, DA သေံအောကျ, receptors ၏နှစ်ခုအတန်းကကမကထပြုခဲ့သောဤအချက်ပြလမ်းကြောင်းဟာသူတို့ရဲ့တိကျတဲ့အချက်ပြပေါ် မူတည်. ကွဲပြားကြောင်းပေးထား, ဦးနှောက်မှာသူတို့ရဲ့ Synaptic ကွန်ရက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အကျိုးဆက် Synaptic plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ဆဲလ်အမျိုးအစားနှင့်ဦးနှောက်ဒေသ (Beaulieu နှင့် Gainetdinov, 2011; Girault, 2012).
D2 receptors တနည်း spliced ​​နေကြသည်အဖြစ် D2 receptors ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့အခြေအနေကကွဲပြားဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများနှင့် subcellular ဒေသခံနှင့်အတူ isoforms မှမြင့်တက်ပေးခြင်း, နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေး။ နှစ်ခု isoforms ၏အတိအကျအချိုးအစားအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ပေမယ့်ကြီးများ isoform (အားလုံးဦးနှောက်ဒေသများတွင်နေကြသည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဖို့ပုံပေါ်Montmayeur et al ။ , 1991) ။ တကယ်တော့, D2 ၏ phenotype အဲဒီ receptor စုစုပေါင်းနောက်ကောက် (KO) ကြွက် (D2L KO ကြွက်၏ထံမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်Baik et al ။ , 1995; Usiello et al ။ , 2000), နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ isoformsmight ကြောင်းညွှန်ပြ Vivo အတွက်။ ထံမှမကြာမီကရလဒ်များကို Moyer et al ။ (2011) တစ်ဦး differential ကိုထောကျပံ့ Vivo အတွက် D2 အဲဒီ receptor အခြားရွေးချယ်စရာ splicing အတွက် intronic Single-ဘေ့ polymorphic (SNPs) နဲ့ D2 အဲဒီ receptor ဗီဇနှစ်ခုမျိုးကွဲများ၏အခန်းကဏ္ဍဖေါ်ပြခြင်းကလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ D2 isoforms ၏ function ကို၎င်း, ကော့ကေးဆပ်တွင်ဤ SNPs နှင့်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုများအကြားတစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့ (Moyer et al ။ , 2011; Gorwood et al ။ , 2012).
MITOGEN-activated ပရိုတိန်း KINASES များ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင် DA-mediated signal
အာရုံခံအတွက်အထူးစိတျဝငျစားတစ်ခုမှာအချက်ပြလမ်းကြောင်း D1 နှင့် D2 receptors များက activated သော mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases, extracellular-signal ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinases (ERK) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာယခုကျယ်ပြန့် (ERK activation ထိုကဲ့သို့သောဆဲလ်သေခံခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖြစ် Synaptic plasticity အဖြစ်အာရုံခံအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု, ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းကို၎င်း CNS အတွက် ERK လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်ကွဲပြားခြားနားသော neurophysiological တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုလက်ခံသည်Chang နှင့် Karin, 2001; Sweatt, 2004; သောမတ်စ်နှင့် Huganir, 2004) ။ ထို့အပြင် ERK activation အမျိုးမျိုး neurotransmitter စနစ်များအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ထုအမျိုးမျိုးသော neurotransmitters ကကမကထပြုခဲ့သည့်အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏ differential ကိုစည်းမျဉ်းပေါ် မူတည်. ညှိနေသည်။ ဒါကြောင့်ထိုအ receptors မှတဆင့် DA ဆွအပေါ်သို့အချက်ပြ ERK ၏ဇီဝကမ္မ output ကိုလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုမြင်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတဲ့ Heterologous ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တွေကိုမှရရှိသောရလဒ်များ (D1- နှင့် D2-class ကို DA receptors နှစ်ဦးစလုံး ERK1 နှင့်2ထိန်းညှိနိုင်သောအကြံပြုChoi et al ။ , 1999; Beom et al ။ , 2004; ချန် et al ။ , 2004; ကင်မ် et al ။ , 2004; ဝမ် et al ။ , 2005) ။ D1 အဲဒီ receptor-mediated ERK single (ထို NMDA glutamtate အဲဒီ receptor နှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်ကပါဝင်ပတ်သက်Valjent et al ။ , 2000, 2005), အရာအများအားဖြင့် striatum တှငျဖျောပွထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ D1 အဲဒီ receptor ဆွ (သူ့ဟာသူအတွက် ERK phosphorylation ဖျန်ဖြေပေးနိုင်သည်မဟုတ်, အစား endogenous အချိုမှုလိုအပ်ပါတယ်Pascoli et al ။ , 2011) ။ D1 အဲဒီ receptor activation နှင့်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့အဖြစ် PKA ၎င်း၏ Thr-32 မှာ DARPP-34 ၏ phosphorylation ဖျန်ဖြေနိုင်ပါတယ် activated ။ Phosphorylated DARPP-32 ပရိုတိန်း phosphatase PP-1 အခြား phosphatase, အ striatal-ကြွယ်ဝပြည့်စုံ tyrosine phosphatase (အဆင့်) dephosphorylates ရာ၏ inhibitor အဖြစ်အစွမ်းထက်ပြုမူနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်၏ Dephosphorylation (အရှင်အဆင့် ERK dephosphorylate ခွင့်ပြု၎င်း၏ phosphatase လှုပ်ရှားမှုမြှင့်လုပ်ဆောင်ရှင်ပေါလု et al ။ , 2003) ။ DARPP-32 လည်း MEK, ERK ၏အထက်ပိုင်း kinase (dephosphorylating ထံမှ PP-1 တားဆီး, ဖြစ်နိုင်သည် PP-1 ဟန့်တားအသုံးပြုပုံ ERK ၏အထက်ပြုမူValjent et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့် D1 အဲဒီ receptor ကို Activation အဆင့်အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်း ERK ၏အထက်ပိုင်း kinase ၏ dephosphorylation တားဆီးနေဖြင့်ယင်း၏ dephosphorylation ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် ERK phosphorylation တိုးမြှင့်ဖို့ဆောင်ရွက်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, D1 နှင့် NMDA receptors အကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်ဆွေးနွေးချက်ဟာ ERK activation စေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လတ်တလောလေ့လာမှု (D1 receptors ၏ဆွ NMDA receptors မှတဆင့်ကယ်လစီယမ်ဝင်လာတိုးပွါးကြောင်း src-မိသားစု tyrosine kinase အားဖြင့် NMDA အဲဒီ receptor NR2B subunit ၏ phosphorylation ကပါဝငျတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြသPascoli et al ။ , 2011) ။ ဤသည်ကယ်လစီယမ်လာမှုသည် Ras-RAF-MEK အဆငျ့ဆငျ့ကနေတဆင့် ERK ကိုသက်ဝင်နိုင်သည့်ကယ်လစီယမ်နဲ့ calmodulin-မှီခို kinase II ကို, (အပါအဝင်အချက်ပြလမ်းကြောင်းတစ်အရေအတွက်ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်တိုးလာFasano et al ။ , 2009; Shiflett နှင့် Balleine, 2011; Girault, 2012) ။ အကျိုးဆက် D1 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation (အချိုမှု receptor အချက်ပြနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာဟောပြောပွဲအပြင် phosphatases နှင့် kinases ကရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းလုပ်ကိုင်ဂဏန်း Figure11).
D1 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation အချက်ပြလမ်းကြောင်း။ D1 အဲဒီ receptor-mediated ERK single အတွက် striatum အတွက်အများစုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသော NMDA glutamtate အဲဒီ receptor နှင့်အတူအပြန်အလှန် (စာသားမကြည့်ပါ), ပါဝငျသညျ။ D1 receptors ၏ဆွပေးနိုင်မဟုတျပါဘူး ...
D2 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation ဆိုတဲ့ Heterologous ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တွေကိုအစီရင်ခံထားသည် (Luo အဘိဓါန် et al ။ , 1998; ဝလေဝလေ et al ။ , 1998; Choi et al ။ , 1999) ။ D2 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation Gαအပေါ်မှီခိုဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်i ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီ, ထိုသို့ thatit နောက်ဆုံးတော့ ERK (activate လုပ်ဖို့မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသောအဲဒီ receptor tyrosine kinase ၏ transactivation လိုအပ်ပါတယ်ပေါ်လာသောChoi et al ။ , 1999; ကင်မ် et al ။ , 2004; ဝမ် et al ။ , 2005; Yoon et al ။ , 2011; Yoon နဲ့ Baik, 2013) ။ Arrestin လည်း D2 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation အထောက်အကူပြုရန်အကြံပြုထားသည် (Beom et al ။ , 2004; ကင်မ် et al ။ , 2004), တစ်ဦးβ-arrestin / dynamin-မှီခိုထုံးစံ၌ clathrin-mediated endocytosis စည်းရုံးအားဖြင့် MAPK အချက်ပြကိုသက်ဝင်နိုင်သည့် (ကင်မ် et al ။ , 2004) ။ Gq ပရိုတိန်းမှ receptorscoupling D2 ၏တစ်ဦးကထပ်မံဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ဤကိစ္စတွင်အတွက် Gq ပရိုတိန်း-mediated PKC activation လည်း (ERK activation သွေးဆောင်နိုင်Choi et al ။ , 1999; ဂဏန်း Figure22).
D2 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation အချက်ပြလမ်းကြောင်း။ D2 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation Gαအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်i ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီ။ ဒါဟာအစ D2 အဲဒီ receptor-mediated ERK activation အဲဒီ receptor tyrosine kinase ၏ transactivation လိုအပ်သည်ပေါ်လာသည်, ...
ဒီ DA အဲဒီ receptor-mediated ERK အချက်ပြ၏ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍ၏အမြင်တွင်ပြုလုပ် mesencephalic အာရုံခံအတွက်, DA အလှည့်ထိုသို့သော Nurr2, အများအတွက်အရေးပါတစ်ဦးကူးယူအချက်အဖြစ်ကူးယူအချက်များမြှင့်လုပ်ဆောင်သော mesencephalic D1 receptors မှတဆင့် ERK အချက်ပြမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည် DA အာရုံခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (ကင်မ် et al ။ , 2006) ။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီအလုပ်အဆင့်သို့မဟုတ် Wnt5a D2 receptors (နှင့်အတူအပြန်အလှန်အားဖြင့်, ဒီစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သရုပ်ပြကင်မ် et al ။ , 2008; Yoon et al ။ , 2011) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌, ဒီအချက်ပြအရွယ်ရောက်သူဦးနှောက်ထဲမှာ DA neurotransmission အတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်တစ်ဦး D2-class ကိုရန်ဖြစ်သော atypical Anti-psychotic clozapine, ERK1 /2phosphorylation လျှော့ချနေစဉ်အတွင်းသို့သော် dorsal striatum ထဲမှာ, ပုံမှန် Anti-psychotic D2-class ကိုအဲဒီ receptor ရန် haloperidol ၏အုပ်ချုပ်ရေး, ERK1 /2၏ phosphorylation နှိုးဆွပေး , haloperidol နှင့် clozapine အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် phosphorylation ၏ကွဲပြားပုံစံများသွေးဆောင်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း (Pozzi et al ။ , 2003) ။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤ D2 အဲဒီ receptor-mediated ERK အချက်ပြ၏ဇီဝကမ္မဆက်စပ်မှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြဿနာအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
အတူတူယူပါက D1and D2 receptors ကွဲပြားယန္တရားများမှတဆင့် ERK activation သွေးဆောင်ခြင်း, တဦးတည်း, ဤ receptors ၏ activation တည်နေရာနှင့်သူတို့ဖော်ပြသည့်အာရုံခံ၏ဇီဝကမ္မ status ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်ကိုစိတ်ကူးနိုငျကွောငျးထငျရှားပါသညျ။
မူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဆောင်အပြုအမူ D1 AND D2 receptor ၏အခန်းကဏ္ဍ
ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမျိုးကွဲတိကျတဲ့ agonists နှင့်ရန်သုံးပြီးအဖြစ်အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇ KO ကြွက်များ၏ဆန်းစစ်နေဖြင့် pharmacologically စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ optogenetics နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်၏အသုံးပြုမှုအတွက်မကြာမီကတိုးတက်မှုယခုဤအ receptors ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုတစ်ခုသန့်စင်ပြီးစာမေးပွဲခွင့်ပြု Vivo အတွက် (စားပှဲ Table11).
ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေအတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းက္ပ။
ထိုကဲ့သို့သောကင်းနောက်ဆက်တွဲအုပ်ချုပ်ရေး၏ locomotor လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှု, သတိထားအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း (တစ်တိုးတက်သောနှင့်တည်မြဲတိုးမြှင့် induces အဖြစ် psychostimulant မှ exposureRobinson နဲ့ Berridge, 1993; Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000; Kalivas နှင့် Volkow, 2005; Steketee နှင့် Kalivas, 2011) ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ခုကွဲပြားအဆင့်ပါဝင်သည်; စတင်ထုတ်ဖော်။ ကနဦးအဆင့်တွင်နေ့စဉ်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါတိုးမြှင့အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု extracellular DA အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်သောကာလအတွင်းကာလကိုရည်ညွှန်းသည်။ အမူအကျင့်ာင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ချုပ်ရာပြီးနောက်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်, ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအဖြစ်လူသိများကြာရှည်ာင်း, (ထုတ်လုပ်Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000; သောမတ်စ် et al ။ , 2001; Steketee နှင့် Kalivas, 2011) ။ ဟူသောအသုံးအနှုနျးအဆင့် neuroadaptation ၏အဆငျ့ဆငျ့ကို (နှင့်ဆက်နွယ်သောမူးယစ်ဆေး၏ချုပ်ရာပြီးနောက်မြဲမူးယစ်ဆေး Hyper-တုန့်ပြန်သဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Kalivas နှင့် Duffy, 1990; Robinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ ဒီဖြစ်စဉ်စမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်အများအားဖြင့်လေ့လာခဲ့လျက်ရှိသည်စဉ်အခါ, အာရုံခံ plasticity နောက်ခံအပြုအမူာင်း (လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးမတရားသော compulsive အထောက်အကူပြုသော neuroadaptations ရောင်ပြန်ဟပ်ယုံကြည်Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Kalivas et al ။ , 1998) ။ ဒါဟာ (ထို glutamatergic circuitry နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ထဲမှာ, နျူကလီးယပ် accumbens ဖို့ VTA ထံမှ mesolimbic DA စနစ် (NAc) နှင့် prefrontal cortex ကဤပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကို၏အရေးပါသောအာမခံကြောင်းအကြံပြုထားသည်Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Kalivas et al ။ , 1998; Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000).
အပြုအမူကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်း, ဒါမှမဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ sensitized တိရစ္ဆာန်များ (Kalivas နှင့် Duffy, 1990; Parsons နှင့်တရားမျှတရေး, 1993) မူးယစ်ထိတွေ့ခြင်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် NAc အတွက်တိုးမြှင့် DA လွှတ်ပေးရန်ပြသပါ။ neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများအပြင်, DA ယင်း၏ receptors မှ binding (အပြုအမူာင်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍSteketee နှင့် Kalivas, 2011) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်း VTA DA အာရုံခံ၏တိုးမြှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဆက်စပ်နေသည် D2 autoreceptor sensitivity ကိုလျော့နည်းသွား (အဖြူနှင့်ဝမ်, 1984; ဟင်နရီ et al ။ , 1989) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ယူဆရ autoreceptor-ရွေးချယ်သော D2 ရန် eticlopride ၏အနိမ့်အညွှန်းများကိုထပ်ခါတလဲလဲအချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ထိုး, (စိတ်ကြွဆေးမှနောက်ဆက်တွဲတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်Tanabe et al ။ , 2004).
လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကို D1 နှင့် D2 DA receptors locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအတွက် differential ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ D1 အဲဒီ receptor haloperidol antagonists နေစဉ် D23390 အဲဒီ receptor ရန် SCH2စူးရှသောကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခု attenuation locomotor တုံ့ပြန်မှုပြပြီး, raclopride (မျှထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့နဲ့အတူဥပမာအားဖြင့်, pharmacological ချဉ်းကပ်အလုပ်သမားကနဦးလေ့လာမှုများကြွက်သို့မဟုတ်ကြွက် pre-ကုသကြောင်းပြသကြCabib et al ။ , 1991; Ushijima et al ။ , 1995; ဒေါ့မွန်နှင့် Unterwald, 2002) ။ ဤရလဒ်သည်ရွေ့လျားအပေါ်ကိုကင်းများ၏လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှု၏မော်ဂျူအတွက် DA အဲဒီ receptor Subtype ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးကိုကင်းများ၏ထပ်တလဲလဲဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်သည့်အမူအကျင့်ာင်းပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူက D1 အဲဒီ receptor ရန် SCH23390 ၏, သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ရန်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲ sulpiride ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ပြီး YM-09151-2 သို့မဟုတ် eticlopride, အသော induction မထိခိုက်ပါဘူး (ကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းKuribara နှင့် Uchihashi, 1993; Mattingly et al ။ , 1994; Steketee, 1998; အဖြူရောင် et al ။ , 1998; Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000).
အဆိုပါကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအပေါ် SCH23390 တိုက်ရိုက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု, sniffing နှင့် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ကြွက်များတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ, ဤလေ့လာမှု NAc အတွက် D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ဆွ cocaine- များအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပြသ CPP က, ဒါပေမယ့်မရကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားများအတွက် (Baker et al ။ , 1998; Neisewander et al ။ , 1998) ။ ကြွက်များတွင် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရန် sulpiride ၏တိုက်ရိုက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ပြုတ်ရည် D2 receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ထိုစူးရှသောကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားနောက်ကြောင်းပြန်ကြောင်းသရုပ်ပြNeisewander et al ။ , 1995; Baker et al ။ , 1996), ဒါပေမဲ့အဲဒီလေ့လာမှုများကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ကြဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာကအချင်းချင်းအပြန်အလှန် medial prefrontal cortex သို့ D2 အဲဒီ receptor agonist quinpirole ၏ဆေးထိုးခြင်း (စတင်ပိတ်ဆို့နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျး attenuated ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်Beyer နှင့် Steketee, 2002).
D1 အဲဒီ receptor တရားမဝင်သောကြွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများ၏အခြေအနေတွင်လေ့လာခဲ့ကြနှင့်ကနဦးလေ့လာမှုများ (D1 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရိုင်း-type အမျိုးအစား littermates နှိုင်းယှဉ်မော်တာများနှင့်ကျပုံစံအပြုအမူတွေအပေါ်ကိုကင်းများ၏ psychomotor လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းထင်ရှားXu et al ။ , 1994; Drago et al ။ , 1996) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (D1 အဲဒီ receptor KO ကင်းဖို့စူးရှ locomotor တုံ့ပြန်မှု abolishes, ဒါပေမယ့်အပြည့်အဝအားလုံးဆေးများမှာကင်းဖို့ locomotor ာင်းတားဆီးပါဘူးပုံKarlsson et al ။ , 2008), D1 receptors ၏မျိုးဗီဇ KO အပြည့်အဝအားလုံးအခြေအနေများအောက်တွင်ကင်းာင်းပိတ်ဆို့ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းဆန္ဒပြ။
D2 အဲဒီ receptor KO ကြွက်များတွင်လျှော့ယေဘုယျ locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်တကွ, ကိုကင်း-သွေးဆောင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ကို WT ကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကတော့ကိုကင်း-mediated အပြုအမူာင်းသွေးဆောင်နိုင်စွမ်း, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူကင်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလားတူခဲ့ကြသည် sensitivity ကိုအတွက်အနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်း (Chausmer et al ။ , 2002; Welter et al ။ , 2007; sim et al ။ , 2013) ။ အဆိုပါ D2 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်နေတဲ့ shRNA အတူ lentiviral အားနည်းချက်ကို၏ပြုတ်ရည်အားဖြင့် NAc အတွက် D2 receptors တွေပျက်စီးမှု Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုမထိခိုက်ခဲ့ပါ, မကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း, ဒါပေမယ့်ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏အပ်နှင်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တားစီး (sim et al ။ , 2013) ။ အတူတူယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, ပြင်းထန်စွာ NAc အတွက် D2 receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုကင်း-mediated အပြုအမူာင်းတားဆီးလျက်, NAc အတွက် D2 အဲဒီ receptor စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းဖြင့်အစပျိုး Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍမမအကြံပြု ။
ဆဲလ်-type အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထုံးစံ၌ Cre recombinase ဖော်ပြကြောင်းဗီဇအင်ဂျင်နီယာကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးမကြာသေးမီလေ့လာမှုများ, ကိုကင်း-စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ MSNs အချို့အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, D32 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ DARPP-2 ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကင်းဖို့ပိုမိုစူးရှ locomotor တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ် (Bateup, 2010) ။ Hikida နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်မြောက်ရေး (D1-ဖော်ပြ MSNs များအတွက်) (D2-ဖော်ပြ MSNs များအတွက်) ပစ္စည်းဥစ္စာ P သို့မဟုတ် enkephalin ( အသုံးပြု. tetracycline-ဖိနှိပ်ကူးယူအချက် (tTa) ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ AAV virus သယ်ဆောင်အသုံးပြုခဲ့Hikida et al ။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကား virus သယ်ဆောင်ရွေးချယ်တစ်ခုချင်းစီကို MSN ကိုမျိုးကွဲအတွက် Synaptic ဂီယာဖျက်ပယ်ခြင်း, မေးခိုင်အဆိပ်အတောက်အလင်းကွင်းဆက် (TN) ကို tetracycline-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်များကထိန်းချုပ်ထားခဲ့သောအတွက်ကြွက်များ၏ NAc သို့ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမေးခိုင်အဆိပ်အတောက်နှင့်အတူ D1 / D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ MSNs ၏ပြောင်းပြန် inactivation (Hikida et al ။ , 2010) ဆုလာဘ်သင်ယူမှုနှင့်ကိုကင်းာင်းအတွက် D1 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြဆဲလ်များ၏မြင်သာထင်သာအခန်းကဏ္ဍထင်ရှားပေမယ့် D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြဆဲလ်များ၏ inactivation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ာင်းမရှိအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာ GPCR (က G ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated စကားရပ်နှင့်အတူ DREADD (သီးသန့်တစ်ဦးဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated ဒီဇိုင်နာ receptors) မဟာဗျူဟာများ, အသုံးပြုခြင်းI / Oလူ့ muscarinic M က -coupled4အဲဒီ receptor DREADD, hM4တစ်ခုမဟုတ်ရင် pharmacologically အစွမ်းမဲ့ ligand အားဖြင့် activated ကြောင်း: D), ဖာဂူဆန် et al ။ (2011) striatal D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြအာရုံခံ၏ activation စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် facilitated ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော် NAc အတွက် D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြဆဲလ်များ၏ optogenetic activation (ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းမပြောင်းလဲမှုကိုသွေးဆောင်Lobo, 2010).
အလင်းကို activated ကလိုရိုက်စုပ်စက်သုံးပြီး D1 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ MSNs ၏ Optogenetic inactivation, halorhodopsin eNpHR3.0 (တိုးမြှင့် Natronomonas pharaonis ) 3.0 halorhodopsin, ကိုကင်းထိတွေ့မှုကာလအတွင်းကင်း-သွေးဆောင် locomotor အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးကို attenuation မှု (ချန်ဒရာ et al ။ , 2013) ။ ထို့အပွငျ D1 အဲဒီ receptor KO ကြွက်များတွင် NAc ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ D1 အဲဒီ receptor အချက်ပြ၏ခြွင်းချက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး (အ NAc ၏အဓိကဒေသတွင်း၌ D1 အဲဒီ receptor စကားရပ်များတွင်ရလဒ်, ဒါပေမယ့်မ shell ကို, ကမကထပြုခဲ့ D1 အဲဒီ receptor-မှီခိုကင်းာင်းဂိုးနှင့် Zweifel, 2013) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် D1 နှင့် D2 receptors နှင့်၎င်းတို့၏မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြလမ်းကြောင်း၏တိကျသောအလှူငွေဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့် DA ယန္တရားများပြင်းထန်စွာ, D1 နှင့် D2 receptors များအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းဖျန်ဖြေကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
conditional PLACE မှာ Preferences
အဆိုပါ CPP ကပါရာဒိုင်းတစ်ဦးဂန္ (Pavlovian) အေးစက်မော်ဒယ်နဲ့အသုံးအများဆုံး preclinical အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအခြေအနေတွင်မော်တော်ယာဉ်ထိုးနှင့်အတူတွဲနေချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏လေ့ကျင့်ရေးအဆင့်စဉ်အတွင်းတဦးတည်းကွဲပြားအခြေအနေတွင် (မူးယစ်ဆေးဝါးထိုးနှင့်အတူတွဲနေသည်သောမတ်စ် et al ။ , 2008) ။ တစ်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်အခမဲ့ CPP ကစမ်းသပ်ကာလအတွင်းတိရစ္ဆာန်တို့သည် drug- နှင့်ယာဉ်-တွဲအခင်းအကျင်းများအကြားရွေးချယ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအခြေအနေတွင်တစ်ခုတိုးလာ preference ကို (ထိုမူးယစ်ဆေးရဲ့ Pavlovian အားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောမတ်စ် et al ။ , 2008).
ဒါကြောင့်ယခင်က D1 အဲဒီ receptor ရန် SCH23390 နှစ်ခုစလုံးစနစ်တကျနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်း CPP ကတားဆီးကြောင်းအစီရင်ခံထားခဲ့သော်လည်း (Cervo နှင့် Samanin, 1995; Baker et al ။ , 1998), D1 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေကို (CPP ကပါရာဒိုင်းအတွက်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြသတင်းပို့ပြီမိုင်းလုပ်သား et al ။ , 1995; Karasinska et al ။ , 2005) ။ CPP ကအတွက် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်စပ်လျဉ်း D2 တူသောရန်ကင်းသဖြင့်သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပျက်ကွက်သောစာပေအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာများသဘောတူ (ရှိSpyraki et al ။ , 1982; Shippenberg နှင့် Heidbreder, 1995; Cervo နှင့် Samanin, 1995; Nazarian et al ။ , 2004) ။ ဤအ pharmacological လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, D2 အဲဒီ receptor KO ကြွက် (WT ကြွက်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် CPP ကရမှတ်ပြသWelter et al ။ , 2007; sim et al ။ , 2013) ။ ထို့အပွငျ D2L - / - WT ကြွက်ပြုသကဲ့သို့ကြွက် (ကိုကင်းရန် CPP ကတီထွင်Smith က et al ။ , 2002).
မကြာသေးမီကစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအပေါ် D2 receptors တစ်ခြွင်းချက် presynaptic KO ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံခဲ့ပြီး, ဤလေ့လာမှု D2 autoreceptors ချို့တဲ့ကြွက်, ကိုကင်း supersensitivity ပြသကင်းတိုးပွားလာရာအရပျ preference ကိုအဖြစ်အစားအစာအကျိုးသည်တိုးမြှင့်လှုံ့ဆျောမှုပြ, ဖြစ်ကောင်းမရှိစေရန်ကြောင်းသရုပ်ပြ နောက်ထပ် extracellular DA elevates နှင့် postsynaptic DA receptors (များ၏ဆွကောင်းလာတာပါကြောင်း autoreceptors အားဖြင့် presynaptic တားစီး၏မရှိခြင်းရန်Bello et al ။ , 2011).
စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့မျဉ်းကြောင်းမှရရှိသောရလဒ်များ D1-ဖော်ပြ MSNs ရွေးချယ် optogenetics အားဖြင့် activated နေကြသည်သောအခါ, NAc အတွက် DIO-AAV-ChR1-EYFP ဖော်ပြ D2-Cre ကြွက်တွေဟာနှိုင်းယှဉ်ကင်း / အပြာ-အလင်း preference ကိုတစ်ဦးသိသိသာသာတိုးပြသကြောင်းပြသ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (Lobo, 2010) ။ ဆနျ့ကငျြ, D2-Cre ကြွက် DIO-AAV-ChR2-EYFP (ထိန်းချုပ်မှုမှကိုကင်း / အပြာ-အလင်း preference ကိုဆွေမျိုးတစ်ဦးသိသိသာသာကို attenuation ပြဖော်ပြLobo, 2010), အကင်းဆုလာဘ်အကျိုးသက်ရောက်မှု antagonizing D1-ဖော်ပြ MSNs ၏ activation အတူကင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်အတွက် D2-ဖော်ပြ MSNs ၏ activation များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ implicating ။ အဆိုပါမေးခိုင်အဆိပ်အတောက်နှင့်အတူ D1-ဖော်ပြ MSNs ၏တားစီး (Hikida et al ။ , 2010D2-ဖော်ပြ MSNs အတွက် Synaptic ဂီယာဖျက်သိမ်းခြင်းပြီးနောက်ကင်း CPP ကရန်မပွောငျးလဲလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်စဉ်) (တစ်လျော့နည်းသွားကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက်ရလဒ်Hikida et al ။ , 2010) ။ ထို့ကြောင့်ဤ optogenetics သုံးပြီး data နဲ့အာရုံခံ၏ဆဲလ်-type အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ် inactivation psychostimulants မှနှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ D1 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ MSNs နှင့် dampening D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ MSNs နှင့်အတူချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအတွက် D1-နှင့် D2-ဖော်ပြ MSNs ၏ဆန့်ကျင်အခန်းကဏ္ဍ ဆက်စပ်. အ ဤအအပြုအမူတွေ (Lobo နှင့် Nestler, 2011).
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များမူးယစ်ဆေးထိုးဘို့စာနယ်ဇင်း (သို့မဟုတ်နှာခေါင်း Poke) လီဗာထားတဲ့အတွက်အော်ပရေတာမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ "Self-အုပ်ချုပ်ရေး" အပြုအမူပါရာဒိုင်း (စွဲလမ်း၏လူ့ရောဂါဗေဒ၏တိရစ္ဆာန်အမူအကျင့်မော်ဒယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောမတ်စ် et al ။ , 2008) ။ ဒါဟာ 6-hydroxy DA (6-OHDA) နဲ့ဒါမှမဟုတ် NAc အတွက် neurotoxin kainic အက်ဆစ်နှင့်အတူ DA ဆိပ်ကမ်း၏ရွေးချယ်တွေ့ရှိရပါသည်သိသိသာသာကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု mesolimbic အပေါ်သို့မှီခိုသောအယူအဆ supporting, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည် DA (Pettit et al ။ , 1984; Zito et al ။ , 1985; ကာဣနနဲ့ Koob, 1994) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှုများ (accumbal extrasynaptic DA အဆင့်ဆင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် cocaineself-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းတိုးမြှင်ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြHurd et al ။ , 1989; Pettit နှင့်တရားမျှတရေး, 1989) နှင့်မျောက် (Czoty et al ။ , 2000) ။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက် NAc အတွက်တိုးမြှင့် DA ဂီယာကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
DA အဲဒီ receptor ရန်နှင့် agonists တစ်ထိုး-မှီခို biphasic အကျိုးသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်း, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး modulate ။ D1 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဥပမာအားဖြင့်, ရွေးချယ်ရန် (Woolverton, 1986; Britton et al ။ , 1991; Hubner နှင့် Moreton, 1991; Vanover et al ။ , 1991; ကာဣနနဲ့ Koob, 1994) နှင့် D2 (Woolverton, 1986; Britton et al ။ , 1991; Hubner နှင့် Moreton, 1991; ကာဣနနဲ့ Koob, 1994) receptors ရန်၏အနိမ့်ဆေးများတုံ့ပြန်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်, ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများတုံ့ပြန် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့ကျသွားသည်။ ဤသည်မော်ဂျူကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူတွေအတွက် NAc DA receptors တစ်ဦးကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြခြင်း, NAc ပေမယ့်မ caudate နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor တရားမဝင်သောကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီး, အကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ဤ receptors တွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလေ့လာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, D1 အဲဒီ receptor KO ကြွက်တွေမှာပုံမှန်ကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏လေ့လာရေးနေသော်လည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ဤကြွက် eliminatedin ခဲ့သည်ကာဣန et al ။ , 2007) ။ ကိုကင်းမြင့်မားဆေးများမှအလယ်အလတ်၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအမှန်တကယ်တိုးမြှင့်နေစဉ် D2 အဲဒီ receptor ခုနှစ်တွင် KO ကြွက်သို့သော်ကင်းဆေးများအလယ်အလတ်မှအနိမ့်၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထိခိုက်ခဲ့ကာဣန et al ။ , 2002) ။ မကြာသေးမီက Alvarez နှင့် Co-အလုပ်သမား NAc အတွက် D2-ဖော်ပြ MSNs ပေါ်သို့ Synaptic အားကောင်းသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (တစ်သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအစီရင်ခံBock et al ။ , 2013) ။ D2-MSNs ၏ optogenetic activation ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းချုပ်ဖို့ NAc လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက် D2-MSNs ၏စုဆောင်းမှုအကြံပြုခြင်း, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှိမ်နင်းနေစဉ် chemicogenetic ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု. D2-MSNs ၏တားစီး (ကိုကင်းရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုမြှင့်တင်ရန်Bock et al ။ , 2013).
ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement စုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေး D2 အဲဒီ receptor agonists ၏အုပ်ချုပ်မှု (ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ reinstates ကြောင်းထင်ရှားကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996; de Vries et al ။ , 1999, 2002; Spealman et al ။ , 1999; Khroyan et al ။ , 2000; Fuchs et al ။ , 2002) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, D2 အဲဒီ receptor ရန် (ကိုကင်း Prime-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ attenuateSpealman et al ။ , 1999; Khroyan et al ။ , 2000), ကြိုတင်ကင်းတဲ့ Prime ဆေးထိုးဖို့ D2 ကဲ့သို့ agonist နှင့်အတူ Pre-ကုသမှု (ထိုအပြုအမူ potentiated စဉ်ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996; Fuchs et al ။ , 2002) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (D1 တူသောအဲဒီ receptor agonists ကင်း-ရှာအပြုအမူပြန်လည်မပုံပေါ်ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996; de Vries et al ။ , 1999; Spealman et al ။ , 1999; Khroyan et al ။ , 2000) ။ တကယ်တော့, system အုပ်ချုပ် D1 ကဲ့သို့ agonists နှင့်ရန် (က priming ကိုကင်းဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ attenuate နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996; -Norman et al ။ , 1999; Spealman et al ။ , 1999; Khroyan et al ။ , 2000, 2003), ကိုကင်းရှာ၏ reinstatement-သွေးဆောင် priming အတွက် D1 နှင့် D2 receptors တစ် differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုဖေါ်ပြခြင်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေရလာဒ် (D2 receptors ၏မရှိခြင်းအတွက်ကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement မထိခိုက်ခဲ့ညွှန်ပြsim et al ။ , 2013) ။ ဒါဟာ (မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement ကင်း-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ဖိအား re-ထိတွေ့မှုအားဖြင့်လည်း precipitated နိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်Shaham et al ။ , 2003) ။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေရလဒ်တွေကိုစိတ်ဖိစီးမှု WT ကြွက်တွေထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement potentiates စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု Synaptic ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် D2 receptors တစ်ခု unexplored အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုသည် D2 အဲဒီ receptor Mutant တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement နှိမ်နင်းကြောင်းတွေ့ရှိရ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းဖြင့်အစပျိုးပြုပြင်မွမ်းမံ (sim et al ။ , 2013).
အစားအစာဆုခမြ IN DOPAMINE signal
အစားအစာနှင့်အစားအစာ-related တွေကိုပု NAc, hippocampus, amygdala နှင့် / သို့မဟုတ် Pre-တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ midbrain (အပါအဝင်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ကိုဆားကစ်, ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်Palmiter, 2007; Kenny, 2011) ။ ဒါဟာ mesolimbic DA စနစ်ကသဘာဝအဆုလာဘ်များနှင့်သူတို့ရှာတွေ့ထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏သင်ယူမှုကိုအားပေးအားမြှောက်သည်ဟုယုံကြည်လျက်ရှိ၏ အရှင်, အစားအစာနှင့်ရေ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကို DA အာရုံခံ၏လျင်မြန်သောပစ်ခတ်ရန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အကျိုးကို၏ဝယ်ယူဆီသို့ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့ (Palmiter, 2007) ။ အမှန်စင်စစ် DA-လစ်လပ်ကြွက် (အစာကျွေးဖို့လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုအရှုံးပြသZhou နှင့် Palmiter, 1995), D1 အဲဒီ receptor တရားမဝင်သောကြွက်နို့အပြီးနှောင့်နှေးတိုးတက်မှုနှင့်အနိမ့်ရှင်သန်မှုပြနေစဉ်; ဒီ phenotype D1 အဲဒီ receptor ၏မရှိခြင်းတစ်မော်တာလိုငွေပြမှုကိုပိုမိုဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုတစ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာရန်လွယ်ကူ access ကိုအတူ KO ကြွက်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့နိုင်ပါတယ် (Drago et al ။ , 1994; Xu et al ။ , 1994) ။ ဆနျ့ကငျြ, D2 အဲဒီ receptor KO ကြွက် (သူတို့ရဲ့ရိုင်းအမျိုးအစား littermates နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးတိုးလာ Basal စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်အဆင့်နှင့်အတူလျှော့ချအစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုပြသကင်မ် et al ။ , 2010) ။ သို့အတွက်ကြောင့် DA စနစ်၏နှင့်အစားအစာဆုလာဘ်အတွက်အဲဒီ receptor Subtype ၏အတိအကျအခန်းကဏ္ဍ delineate ရန်ခက်ခဲသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအများစုမှာလူ့လေ့လာမှုများအဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အစားအစာဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် D2 အဲဒီ receptor ၏အရေးပါမှုကိုညွှန်ပြ။
အစားအစာဆုခမြ IN D2 receptor Express
တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထား DA receptors အတွက်မူကွဲနှင့် DA လွှတ်ပေးရေး (အထူးသဖြင့် striatal D2 အဲဒီ receptor function ကိုထုတ်ဖော်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်, ကျော်နှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေကြောင်းအကြံပြုStice et al ။ , 2011; Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2013) ။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှာ, (နို့တိုက်ကျွေးသည့် NAc အတွက် extracellular DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါးကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်Bassareo နှင့် Di Chiara, 1997), အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအလားတူထုံးစံ၌။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမတူဘဲအတွက်တစ်ဦးတည်း NAc DA လျော့ကျ (နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်မထားဘူးSalamone et al ။ , 1993) ။ (ဒါဟာ NAc အတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်းနို့တိုက်ကျွေးရေး၏မော်တာအပြုအမူ, ပမာဏနှင့်ကြာချိန်အကျိုးသက်ရောက်ပုံ, ဒါပေမယ့်ကိုလောင်အစားအစာပမာဏကိုလျှော့ချမထားဘူးBaldo et al ။ , 2002) ။ စိတ်ဝင်စားစရာမကြာသေးမီဒေတာမူးရူးစားတစ်ဖက်သတ် NAc shell ကိုနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် ameliorated ခံခဲ့ရကွောငျးဖျောပွခဲ့သဖြင့်, dorsal striatum ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွဒီအပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်နေချိန်မှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် D2 အဲဒီ receptor ၏ activation နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည် (Halpern et al ။ , 2013) ကြွက်တွေမှာ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အတူတူပင်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာနှင့်ထိတွေ့သောအခါ D2 တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆနှင့်အတူ putamen ပြပွဲများတွင် D2 receptors တစ်အောက်ပိုင်းသိပ်သည်းဆကြွက်တွေထက်ပိုကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူကြွက် (အတူတူပင်ဒေသ receptorsin ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်Huang က et al ။ , 2006) ။ ဒီလေ့လာမှုကနာတာရှည်အတွက် DAT နှင့် D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆမြင့်မားတဲ့အဆီဓာတ်စာကုထုံးတွေ, အဝလွန်အဝလွန်-ခံနိုင်ရည်နှင့်အနိမ့်အဆီ-အောင်ကျွေးထိန်းချုပ်မှုကြွက်, နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနာတာရှည်မြင့်မားတဲ့အတွက် caudate putamen ၏ rostral အစိတ်အပိုင်းအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ ခံနိုင်ရည်-အဝလွန်နှင့်အနိမ့်အဆီ-အောင်ကျွေးထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှိုင်းယှဉ် -fat အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ကြွက် (Huang က et al ။ , 2006) ။ D2 အဲဒီ receptor ၏ဤအနိမ့်အဆင့်ကိုပြောင်းလဲ DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ, ထိုသို့ကိုလည်း (High-ဆီဥ, High-သကြားဓာတ်စာစားသုံးမှု D2 receptors ၏ downregulation မှဦးဆောင်ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည်အသေးစား et al ။ , 2003) နှင့်လျှော့ချ DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် (Davis က et al ။ , 2008).
လူ့လေ့လာမှုများအတွက်, အဝလွန်လူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ striatal ဒေသများရှိ D2 receptors ၏လျော့ချစကားရပ်ကိုပြသလေ့ရှိပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအလားတူဦးနှောက်ဒေသများ food- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကို (ဖွငျ့ activated ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီဝမ် et al ။ , 2009) ။ Positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) လေ့လာမှုများ (D2 receptors ၏ရရှိမှုဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းမှအချိုးအစားအတွက်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ယုတ်လျော့ခဲ့အကြံပြုဝမ် et al ။ , 2001), အရှင်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် DA ချို့တဲ့ DA-mediated ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏လျော့နည်းသွား activation များအတွက်လျော်ကြေးပေးအပ်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်ရောဂါဗေဒစားရှည်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။ Volkow နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းပိန်ကြုံသောလူကြီးများနှိုင်းယှဉ်အဝလွန် binding လျော့နည်း striatal D2 အဲဒီ receptor ကိုပြသ, ဤအပြုသဘော dorsolateral prefrontal, medial orbitofrontal, anterior cingulate gyrus နှင့် somatosensory cortical (အတွင်းဇီဝြဖစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရကြောင်းကိုအစီရင်ခံတင်ပြVolkow et al ။ , 2008) ။ ဤသည်လေ့လာရေး striatal D2 receptors အတွက်လျှောက်လျော့နည်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်း striatal prefrontal လမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူမှတဆင့် overeating အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုအုပ်စိုးဆွေးနွေးမှုမှဦးဆောင်လျက်, somatosensory cortical အတွက် striatal D2 receptors နှင့်ဇီဝြဖစ်အကြားအသင်းအဖွဲ့ (ဒေသများတွင်ရှိမရှိကြောင်း ဖြစ်စဉ်ကိုအာခေါင်) (DA အစားအစာများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းညှိပေးသောမှတဆင့်ယန္တရားများများထဲမှအခြေခံနိုင်Volkow et al ။ , 2008).
Stice နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (D1 အဲဒီ receptor အတွက် TaqIA တစ်ခု A2 allele ၏မျိုးဗီဇ polymorphic နှင့်အတူအထူးသဖြင့်သူတို့က, တစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦး hypofunctioning dorsal striatum များအတွက်လျော်ကြေးပေးရန် overeat စေခြင်းငှါပြသနိုင်ဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုDRD2 / ANKK1) အောက်ပိုင်း striatal D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့် attenuation striatal DA အချက်ပြနှင့်ဆက်နွယ်သောမျိုးရိုးဗီဇ, (Stice et al ။ , 2008a,b) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက် (အစားအစာဆုလာဘ်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများတွင်ညှိ DA အချက်ပြဘို့မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်မှာလည်းအထူးသဖြင့်သူများ, အစားအစာစားသုံးမှုစဉ်အတွင်းတုံး striatal activation ကိုပြသတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအဝလွန်များအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြStice et al ။ , 2008a, 2011) ။ သို့သော်မကြာသေးမီကဒေတာ (မူးရူးစားရောဂါနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲအဝလွန်လူကြီးများအတွက် TaqIA D2 အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးကွဲပြားမျိုးရိုးဗီဇ polymorphic ခဲ့ကြောင်းပြသDRD2 / ANKK1) မျိုးဗီဇ (Davis က et al ။ , 2012); ထို့ကြောင့်ကြောင့်ဆင်တူဦးနှောက် DA စနစ်များကိုဤအမူအရာတို့သည် DA အဲဒီ receptor data တွေကိုဦးနှောက်ထဲမှာ DA neurotransmission ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေကိုကိုယ်စားပြုသောအရာကိုသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးသော်လည်း, အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။
အဝလွန်လူတွေ၌ရှိသကဲ့သို့, အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (လူသားများတွင်နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Volkow et al ။ , 1993; Martinez et al ။ , 2004) ။ ဆနျ့ကငျြ, D2 receptors ၏ overexpression (ကြွက်များတွင်အရက်၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေThanos et al ။ , 2001) ။ လူသားမြားသညျတှငျ, အရက်မိသားစုများ၏ Non-အရက်အင်္ဂါများ၌တစ်ဦး Higher-ထက်သာမန် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည် (Volkow et al ။ , 2006; Gorwood et al ။ , 2012), D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်စွဲလမ်းမမှန်တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆ supporting ။ ဒါကြောင့်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှစ်ဦးစလုံး၏ဦးနှောက်ထဲတွင်အနိမ့် Basal DA ပြင်းအားရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး, အနိမ့်စကားရပ်များသို့မဟုတ်အလုပ်မဖြစ် D2 receptors နှင့်အတူအစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုဖြစ်စေနဲ့ဆက်စပ်သည် Periodic ပုံကြီးချဲ့ DA လွှတ်ပေးရန်။
ဦးနှောက်၏အခြားဒေသများအတွက် Dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းအရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ, Fetissov et al ။ (2002) ကြီးမားတဲ့မုန့်ညက်အရွယ်အစားနှင့်အသေးစားမုန့်ညက်အရေအတွက်ပါဝင်သည်ဟုတစ်နို့တိုက်ကျွေးရေးပုံစံကိုပြသပေးသောအဝလွန် Zucker ကြွက်သည်, ventromedial hypothalamus (VMH) တွင် D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်နိမ့်အဆင့်အထိရှိသည်လေ့လာသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်တဲ့အခါရွေးချယ် D2 အဲဒီ receptor ရန်, sulpiride အဝလွန်နှင့်ပိန်ကြုံသောကြွက်၏ VMH သို့ထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်, တစ်ဦး hyperphagic တုံ့ပြန်မှု D2 receptors ၏ပြီးသားအနိမ့်အဆင့် aggravating အသုံးပြုပုံကဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသာအဝလွန်ကြွက်များတွင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှ။ ဤသည်အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor စကားရပ် (DA များအတွက်ဦးနှောက်ဧရိယာများ "တဏှာ" သို့ DA လွှတ်ပေးရန်လွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့သောအစားအစာကိုစားသုံးမိခြင်းနှင့် DA တစ်လျှော့ချမွတ်မပြေနိုင်သောတုံ့ပြန်ချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကာလအတွင်းအဝလွန်ကြွက်အတွက်ပုံကြီးချဲ့ DA လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်စေFetissov et al ။ , 2002).
မကြာသေးမီကတစ်ကြော့လေ့လာမှုမှာအားဖြင့်ကောက်ယူ ဂျွန်ဆင်နှင့် Kenny (2010)ဒါကြောင့် compulsive စားအပြုအမူသရုပ်ပြ, အလေးချိန်ရရှိခဲ့အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့စွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအသောက်တစ်ရွေးချယ်ရေးပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦး "ကော်ဖီဆိုင်အစားအသောက်များတွင်" နဲ့ထောက်ပံ့ပေးတိရိစ္ဆာန်များလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အလွန်အကျွံ adiposity နှင့် compulsive ကဲ့သို့စားအပြင်, ကော်ဖီဆိုင်အစားအသောက်များတွင်ကြွက်လည်း striatum အတွက် D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက striatal D2 receptors ၏ lentivirus-mediated knockdown လျှင်မြန်စွာ (အရေးပါတယ်လို့ High-အဆီအစားအစာမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူစွဲတူသောဆုလာဘ်လိုငွေပြမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကြွက်များ behaviorin compulsive ကဲ့သို့အစားအစာ-ရှာကြံစတင်ခြင်းအရှိန်ဂျွန်ဆင်နှင့် Kenny, 2010), နောက်တဖန်ဘုံ hedonic ယန္တရားများထို့ကြောင့်အဝလွန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအခြေခံစခွေငျးငှါကိုညွှန်း။ သို့သော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်း (အတန်ငယ်မျှော်လင့်မထားတဲ့ရလဒ်တွေကို WT ကြွက်နှိုင်းယှဉ်ပြ D2 KO ကြွက်တိုးမြှင် hypothalamic leptin နှင့်အတူတစ်ဦးပိန် phenotype ရှိသည်ဖေါ်ပြခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ကင်မ် et al ။ , 2010) ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ D2 အဲဒီ receptor အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုအပြုအမူအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍအပြင်, ထိုကဲ့သို့သော leptin အဖြစ်စွမ်းအင် homeostasis တစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဇီဝြဖစ်၏ homeostatic စည်းမျဉ်းထဲမှာအခန်းကဏ္ဍထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။ အတူတူအာရုံကြော Integrated tools များနှင့်အတူတစ်ဥပမာ leptin အဲဒီ receptor-ဖော်ပြဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ D2 အဲဒီ receptor ၏မျိုးရိုးဗီဇကြိုးကိုင်ခြွင်းချက်ကန့်သတ်, သို့မဟုတ်အခြားဆုလာဘ်-related အာရုံခံဆဲလ်နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်, အလားအလာအစားအစာထဲမှာ D2 receptors မှတဆင့် DA စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ elucidate နိုင် ဆုလာဘ်နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ homeostatic စည်းမျဉ်း။
HOMEOSTATIC Feed တိုက်နယ်ဆက်စပ် DOPAMINERGIC ဆုခမြ signal
တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားအရှင် homeostatic ထိုကဲ့သို့သော leptin, အင်ဆူလင်နှင့် ghrelin အဖြစ်အစားအစာစားသုံးမှု၏အားပြိုင်မှု, ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏အကျိုးကိုဆားကစ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကို (စားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှုနှင့်အေးစက်၏အမူအကျင့်ရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိကွောငျးဖျောပွသAbizaid et al ။ , 2006; Fulton et al ။ , 2006; Hommel et al ။ , 2006; Baicy et al ။ , 2007; Farooqi et al ။ , 2007; Palmiter, 2007; Konner et al ။ , 2011; Volkow et al ။ , 2011) ။ မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်စွမ်းအင် homeostasis ထိန်းညှိ်ပတ်သက်နေဟော်မုန်းကိုလည်း DA အာရုံခံအပေါ်တိုက်ရိုက် impinge ကြောင်းထုတ်ဖေါ်; ghrelin သူတို့ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာဥပမာ leptin နှင့်အင်ဆူလင်ကိုတိုက်ရိုက် (DA အာရုံခံတားစီးPalmiter, 2007; Kenny, 2011).
Hommel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် VTA DA အာရုံခံ leptin အဲဒီ receptor mRNA ဖော်ပြနှင့်တစ်ဦး intracellular jak-Stats (ကူးယူ၏ဂျနူ kinase-signal ကို transducer နှင့် Active) ၏ activation နှင့်အတူ leptin တုံ့ပြန်ကြောင်းသရုပ်ပြ leptin အဲဒီ receptor တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့်လမ်းကြောင်း, မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြအဖြစ် DA အာရုံခံ (များ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းတစ်လျှော့ချရေးHommel et al ။ , 2006) ။ ဤလေ့လာမှု VTA အတွက် leptin receptors ၏ရေရှည် RNAi-mediated knockdown တိုးမြှင့်အစားအစာစားသုံးမှု, locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှ sensitivity ကိုမှဦးဆောင်နေစဉ် VTA မှ leptin ၏တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှု, အစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားစေပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူထိန်းညှိ receptorsin VTA leptin များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့များနှင့် VTA DA အာရုံခံအပေါ်တစ်ဦးအရံဇီဝဖြစ်စဉ် signal ကို၏တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်သေအထောက်အထားသည်။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ VTA အတွက် leptin အချက်ပြပုံမှန် DA အချက်ပြဖိနှိပ်နှင့်အကျိုးဆက်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှစ်ဦးစလုံးလျော့ကျသောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ စာရေးသူနို့တိုက်ကျွေးရေးပေါ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးလာ DA အချက်ပြနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကွောငျးကိုသရုပ်ပြမပြုခဲ့ပေမယ့်ဤသည် (က, VTA အတွက် leptin အချက်ပြများအတွက်ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုHommel et al ။ , 2006).
Fulton နှင့် Co-လုပ်သားများကိုလည်း DA ဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် leptin ၏မျိုးစုံလုပ်ရပ်များ၏နားလည်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်, VTA DA အာရုံခံအတွက် leptin လုပ်ဆောင်ချက်၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး (Fulton et al ။ , 2006) ။ ကို double-တံဆိပ် immunohistochemistry အသုံးပြုခြင်း, သူတို့ကရံ leptin အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ VTA အတွက်တိုးမြှင့် STAT3 phosphorylation လေ့လာသည်။ DA အာရုံခံနှင့်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအဘို့အအမှတ်အသားများနှင့်အတူတစ်ဦးပြောင်အတိုင်းအတာအထိ colocalized ဒါတွေက pSTAT3-အပြုသဘောအာရုံခံ။ အဆိုပါ NAc ထံမှ tracing Retrograde အာရုံခံ VTA DA အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် NAc မှ leptin receptors စီမံကိန်းကိုဖော်ပြကြောင်းညွှန်ပြ, pSTAT3 အတူ tracer ၏ colocalization ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူတို့က VTA အတွက် leptin function ကိုအကဲဖြတ်တဲ့အခါသူတို့ကတွေ့ရှိခဲ့ ob / ob ကြွက်စိတ်ကြွဆေးတစ်လျော့နည်းသွား locomotor တုံ့ပြန်မှုခဲ့များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးချွတ်ယွင်း leptin ပြုတ်ရည်များကပြောင်းပြန်ခံရအတူထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးထိုးဖို့ locomotor ာင်းရှိကြဤသို့လှုံ့ဆော်အပြုအမူကိုပေါင်းစပ်ဖို့အရေးပါသည့် mesoaccumbens DA လမ်းကြောင်း, ထို့အပြင် (ဒီ adipose-ဆင်းသက်လာ signal ကိုတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ညွှန်ပြFulton et al ။ , 2006) ။ သက်သေအထောက်အထားဤလိုင်းများအရေးကြီးသည့် DA ဆုလာဘ်စနစ် leptin ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအကြံပြုသည်။ သို့သော် leptin အဲဒီ receptor စကားရပ်၏ဇီဝကမ္မ level သည် midbrain အတွက်အလွန်နိမ့်စေခြင်းငှါပေါ်လာကြောင်းပေးထားပုံမှန်လည်ပတ်သော leptin အဆင့်ဆင့်ဟာ VTA အတွင်းအချက်ပြ leptin အဲဒီ receptor အပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်ရှိမရှိ Vivo အတွက် leptin (VTA ၎င်းတို့၏ receptors မှတဆင့် DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုတားစီးဖို့သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေဆဲကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ်Palmiter, 2007).
leptin အမှန်ပင်အကျိုးတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မဖေါ်ပြခြင်းလူ့လေ့လာမှုများလည်းရှိပါတယ်။ Farooqi နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မွေးရာပါ leptin ချို့တဲ့နှင့်အတူလူနာ DA mesolimbic ပစ်မှတ် (၏ activation ပြသကြောင်းအစီရင်ခံFarooqi et al ။ , 2007) ။ leptin ကုသမှုပြီးနောက်, ကောင်းစွာ-ကြိုက်တယ်အစားအစာပုံများ, သာအစာရှောင်ပြည်နယ်အတွက်တသမတ်တည်းထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဒီတုံ့ပြန်မှုပေါက်ဖွားပေးသောနေစဉ် leptin-လစ်လပ်ပြည်နယ်များတွင်ကောင်းမွန်စွာကြိုက်တယ်အစားအစာပုံများ, ဘာသာရပ်ပဲကျွေးမွေးထားပြီးပင်အခါ, တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောလိုသောတုံ့ပြန်မှုပေါက်ဖွားပေးသော ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်တုန့်ပြန်ပါ။ Leptin (ထို NAc-caudate အတွက် activation လျော့နည်းစေခြင်း, mesolimbic activationFarooqi et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု (leptin အဆိုပါ DA system ပေါ်တွင်သရုပ်ဆောင်, အစားအစာဖို့ကြိုးတုံ့ပြန်မှုလျော့ကြောင်းအကြံပြုFarooqi et al ။ , 2007; Volkow et al ။ , 2011) ။ Baicy et al အားဖြင့်နောက်ထပ် fMRI လေ့လာမှု။ လည်းမွေးရာပါ leptin ချို့တဲ့နှင့်အတူလူနာနှင့်အတူဖျော်ဖြေ, အစားအစာ-related လှုံ့ဆော်မှုများကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း, leptin အစားထိုးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကို (insula, parietal နှင့်ယာယီ cortex) ချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အာရုံကြော activation လျှော့ချကြောင်းပြနေစဉ် တားစီးနှင့်မွတ်မပြေနိုင်သောဆက်စပ်ဒေသများအတွက်တိုးမြှင့် activation (ထို prefrontal cortex; Baicy et al ။ , 2007) ။ ဒါကြောင့် leptin inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်မွတ်မပြေနိုင်သောတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောဆားကစ်အပေါ်ပြုမူပုံရသည်။
အစာအိမ်နှင့်ပန်ကရိယအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့နောက်ထပ် peptide ဟော်မုန်း, ghrelin, (အစာစားချင်စိတ်နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့လူသိများသည်Abizaid et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ ghrelin အဲဒီ receptor ကြီးထွားဟော်မုန်း secretagogue 1 အဲဒီ receptor (GHSR) hypothalamic စင်တာများထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် VTA အတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Abizaid နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြွက်နှင့်ကြွက်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရှိရာ VTA ၏အာရုံခံမှခညျြနှောငျ ghrelin တစ် GHSR-မှီခိုထုံးစံ၌, NAc အတွက် DA အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု, synapses ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးပွားလာသော။ ပြသ ထို့အပြင်သူတို့တစ်တွေရွေးချယ် GHSR ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် VTA ပေးပို့သည့် DA ဆုလာဘ် circuitry အားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားကြောင်းအကြံပြု, အစာရှောင်ခြင်းတွင်အောက်ပါပြန်တက်နို့တိုက်ကျွေးရေး ghrelin ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏ orexigenic အကျိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့နှင့်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေစဉ် ghrelin တိုက်ရိုက် VTA အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းအပြုအမူနို့တိုက်ကျွေးမှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသရုပ်ပြ စားစရာဘို့လှုံ့ဆျောမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ ghrelin (Abizaid et al ။ , 2006).
ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သော့ချက်ဟော်မုန်းတဦးဖြစ်ပြီး, နို့တိုက်ကျွေးရေးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ပေးသောအင်ဆူလင်, အစဦးနှောက်ထဲမှာ DA စနစ်ကထိန်းညှိရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ အင်ဆူလင် receptors ထိုကဲ့သို့သော striatum နှင့် midbrain (အဖြစ် DA အာရုံခံကြွယ်ဝဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်Zahniser et al ။ , 1984; Figlewicz et al ။ , 2003), ပုအင်ဆူလင်နှင့် DA စနစ်များအကြားတစ်ဦး functional အပြန်အလှန်အကြံပြု။ အမှန်စင်စစ်, (က DA အာရုံခံပေါ်မှာအင်ဆူလင်ပြုမူပြသခဲ့ပြီး, နှင့် VTA သို့အင်ဆူလင်၏ပြုတ်ရည်ကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းစေFiglewicz et al ။ , 2008; Bruijnzeel et al ။ , 2011) ။ ကြွက်တွေမှာ midbrain DA အာရုံခံအတွက်အင်ဆူလင် receptors ၏ရွေးချယ်ဖျက်မှုအပေါ်မကြာမီကလေ့လာမှုများ (တိုးလာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, တိုးမြှင့်ကောင်ဆီဥကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့် hyperphagia ၌ဤကိုင်တွယ်ရလဒ်များကိုကြောင်းသရုပ်ပြKonner et al ။ , 2011) ။ အင်ဆူလင် acute dopaminergic VTA / SN အာရုံခံ၏ 50% အတွက်အကြိမ်ရေပစ်ခတ်နှိုးဆွနေစဉ်, ဒီတုန့်ပြန်ရွေးချယ် DA အာရုံခံပြီးဖျက်သည့်အင်ဆူလင်အဲဒီ receptor ရှိသူများကြွက်တွေအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီကြွက်တွေထဲမှာ, VTA အတွက် D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤကြွက် (အစားအစာ-ကန့်သတ်အခြေအနေများအောက်တွင်ကင်းတစ်ခုပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုပြKonner et al ။ , 2011) ။ နောက်ထပ်မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာ (အင်ဆူလင် VTA DA အာရုံခံပေါ်သို့ mouse ကို excitatory synapses ၏ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTD) သွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြLabouèbe et al ။ , 2013) ။ ထို့အပွငျ endogenous အင်ဆူလင်အဆင့်ကို elevates သောဒူက high-အဆီမုန့်ညက်, ပြီးနောက်, အင်ဆူလင်ကုထုံးတွေ, LTD occluded ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင် VTA အတွက်အင်ဆူလင်ကြွက်များတွင်စားစရာဘို့ကြွက်တွေမှာအစားအစာ anticipatory အပြုအမူလျော့နည်းစေနှင့် CPP က။ ဒီလေ့လာမှုက (အင်ဆူလင်ဆုလာဘ် circuitry modulate နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ်ပေါက်နှင့် VTA DA အာရုံခံအပေါ်အင်ဆူလင်ကုထုံးတွေ Synaptic plasticity အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးအကြံပြုLabouèbe et al ။ , 2013).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအဓိကအားဖြင့်စွဲလမ်းနှင့်အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုအပါအဝင်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ကိုအာရုံ, အ DA စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကောင်းစွာဒီဆုလာဘ်-circuit ကိုအတွက် DA system ကိုထု glutamatergic ခြင်းဖြင့်မော်ဂျူ, GABAergic နှင့်အပြုအမူ၏အာရုံခံဆက်စပ်မှုဝှက်ဖို့တိကျတဲ့ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းသောအခြား neurotramistter စနစ်များ, ကြောင်းလူသိများသည်။ မကြာမီကအတူတကွတိကျတဲ့အာရုံခံဆဲလ်သို့မဟုတ်ဆားကစ်၏မျိုးဗီဇကိုင်တွယ်အတူအာရုံခံပစ်ခတ်ရန်နှင့် function ကိုအလင်းနှင့်အတူအဖြစ် DREADDs ပြောင်းလဲပစ်ရန် optogenetic tools များအတွက်ထိုးဖောက်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုစွဲလမ်းအတွက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မွမ်းမံဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်, နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ hedonic တန်ဖိုးကို ။ ဒါဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးဤလိုင်းများသည်ဤအပြုအမူအတွက် DA စနစ်၏ neurocircuitry ၌အကြှနျုပျတို့၏လေ့လာမှု၏အနာဂတ်ဦးတည်ချက်တစ်ခုဖောင်ဒေးရှင်းထောက်ပံ့ဘူးသောအဘယ်သူမျှမသံသယဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတိကျတဲ့ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေ၏ induction နှင့်စကားရပ်ပေါ်ဤအကြောင်းမော်လီကျူး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့, ကက်စကိတ်အချက်ပြသည့် D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ်ပတ်သက်နေမော်လီကျူးများပြဥပမာ, အရေးကြီးသောအချက်ပြမော်လီကျူး၏ကျယ်ဝန်းထိန်းသိမ်းရေးပါဝင်သည်နိုင်ဘူး။ အဲဒီနှစျခု receptors သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ, G ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သော ERK, receptors ၏ differential ကိုဖြန့်ဖြူးအဖြစ်ဘုံ singling မော်လီကျူး၏ activation ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်၎င်းတို့၏မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြမော်လီကျူး၏ကွဲပြားအချက်ပြလမ်းကြောင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေမည် employ ကြောင်းပေးထား ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အမျိုးအစား။ ထို့အပြင်အပြုအမူတွေအတွက် DA စနစ်၏ကဒီအယူအဆရေးရာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ, ဒီသုတေသနဆက်စပ်အာရုံကြောချို့ယွင်းခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါများ၏လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားနှစ်ဦးစလုံးအတွက် DA Synaptic လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ, ငါတို့၏ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်များ၏ pathophysiology အခြေခံအာရုံကြောဆားကစ်၏ elucidation အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုကိုရီးယားအစိုးရမှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသောကိုရီးယားအမျိုးသားသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (NRF) မှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် (MSIP; နံပါတ် ၂၀၁၁-၂၀၁၅၈၈၊ ၂၀၁၂-၃၀၅၃၀၃)၊ MSIP - သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာန၊ အိုင်စီတီနှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းနှင့်ထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှကိုရီးယားကျန်းမာရေးနည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (A2011) ၏အစီရင်ခံစာ။
et al Abizaid အေ, လျူ ZW, Andrews က ZB, Shanabrough အမ်, Borok အီး, Elsworth JD ။ (2006) ။ အစာစားချင်စိတ်မြှင့်တင်နေချိန်တွင် Ghrelin midbrain dopamine အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် Synaptic input ကိုအဖွဲ့အစည်းက modulates ။ ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ 116 3229-3239 ။ Doi: 10.1172 / JCI29867 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baicy K. , လန်ဒန် ED, Monterosso ဂျေ, Wong က ML, Delibasi တီ, Sharma ကအေ, et al ။ (2007) ။ Leptin အစားထိုးဗီဇ leptin-လစ်လပ်လူကြီးများအတွက်အစားအသောက်တွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 104 18276-18279 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0706481104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baik JH, Picetti R. , Saiardi အေ, Thiriet G. အ, Dierich အေ, Depaulis အေ, et al ။ (1995) ။ dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ Parkinsonian ကဲ့သို့ locomotor ချို့ယွင်း။ သဘာဝ 377 424-428 ။ Doi: 10.1038 / 377424a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baker DA, Fuchs RA, Specio SE, Khroyan တီဗီ, Neisewander JL (1998) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်စက်ခေါင်းများနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုအပေါ် SCH-23390 ၏ intraaccumbens အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ synapses 30 181–193. doi: 10.1002/(SICI)1098-2396(199810)30:2<181::AID-SYN8>3.0.CO;2-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baker DA, Khroyan တီဗီ, O'Dell LE, Fuchs RA, Neisewander JL (1996) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်စက်ခေါင်းများနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုအပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbenssulpiride ၏သက်ရောက်မှု Differential ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 279 392-401 ။ [PubMed]
Baldo BA, Sadeghian K. , Basso လေး, ကယ်လီ AE (2002) ။ နျူကလိယအတွင်းရွေးချယ် dopamine D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစားသုံးမိအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ငျဒသေ accumbens ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 137 165–177. doi: 10.1016/S0166-4328(02)00293-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bassareo V ကို, Di Chiara G. အ (1997) ။ prefrontal နှင့်ကြော်ငြာ libitum ကျွေးမွေးကြွက်များတွင်အစားအသောက်လှုံ့ဆော်မှုမှ accumbal dopamine ဂီယာ၏တုန့်ပြန်ပေါ် Associates နှင့် nonassociative သင်ယူမှုယန္တရားများ၏ differential သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဂျေ neuroscience။ 17 851-861 ။ [PubMed]
Bateup HS (2010) ။ အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြား subclasses differential striatal မော်တာအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 107 14845-14850 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1009874107 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bateup HS, Svenningsson P. , Kuroiwa အမ်, Gong အက်စ်, Nishi အေ, Heintz N. , et al ။ (2008) ။ psychostimulant နှင့် antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် DARPP-32 phosphorylation ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်း။ နတ်။ neuroscience ။ 11 932-939 ။ Doi: 10.1038 / nn.2153 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Beaulieu JM, Gainetdinov RR (2011) ။ အဆိုပါဇီဝြဖစ်စဉ်, အချက်ပြခြင်း, dopamine receptors ၏ဆေးဝါးဗေဒ။ Pharmacol ။ ဗျာ 63 182-217 ။ Doi: 10.1124 / pr.110.002642 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bello EP, Mateo Y. , Gelman DM, Noaïnဃ, ရှင် JH, အနိမျ့ MJ, et al ။ (2011) ။ dopamine: D (2) autoreceptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေအတွက်အကျိုးသည်ကိုကင်း supersensitivity နှင့်တိုးမြှင်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ neuroscience ။ 14 1033-1038 ။ Doi: 10.1038 / nn.2862 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Beom အက်စ်, Cheong ဃ, တောရက်စ် G. အ, caron MG ကင်မ် KM (2004) ။ extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase ၏ activation များအတွက် dopamine D2 နှင့် D3 receptors ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ၏နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ 279 28304-28314 ။ Doi: 10.1074 / jbc.M403899200 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE (1998) ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 28 309–369. doi: 10.1016/S0165-0173(98)00019-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Beyer အီး, Steketee JD (2002) ။ ကိုကင်းာင်း: dopamine D2 receptors ခြင်းဖြင့်မော်ဂျူ။ Cereb ။ cortex 12 526-535 ။ Doi: 10.1093 / cercor / 12.5.526 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Bock R. , ရှင် JH, Kaplan AR, Dobi အေ, Markey အီး, Kramer PF ။ (2013) ။ အဆိုပါ accumbal သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း Strenghtening compulsive ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမှခံနိုင်ရည်အားပေးအားမြှောက်။ နတ်။ neuroscience ။ 16 632-638 ။ Doi: 10.1038 / nn.3369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Britton DR, Curzon P. , Mackenzie RG, Kebabian JW, Williams က je, Kerkman ဃ (1991) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် D1 နှင့် D2 နှစ်ဦးစလုံး receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေသာဓက။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 39 911–915. doi: 10.1016/0091-3057(91)90052-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bruijnzeel AW, ကော်ရီ LW, ရော်ဂျာဂျာ Yamada အိပ်ချ် (2011) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအင်ဆူလင်နှင့် leptin ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုအပေါ် hypothalamic နျူကလိယ arcuate ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 219 254-264 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2011.01.020 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bunzow JR, et al ဗန် Tol နာရီ, ယူဆပါတယ် DK, အဲလ်ဘတ် P. , အလှပြင်ဆိုင်ဂျေ, Christie ကအမ်။ (1988) ။ တစ်ဦးကြွက် D2 dopamine အဲဒီ receptor cDNA ၏ကိုယ်ပွားနှင့်စကားရပ်။ သဘာဝ 336783-787 ။ Doi: 10.1038 / 336783a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cabib အက်စ်, Castellanos C. , Cestari V. , Filibeck U. , Puglisi-Allegra အက်စ် (1991) ။ D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ရန်ကွဲပြားခြားနားမောက်အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor hyperactivity အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 105 335-339 ။ Doi: 10.1007 / BF02244427 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကာဣန SB, Koob gf (1994) ။ ကြွက်များတွင်အားဖြည့်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် dopamine D-1 နဲ့ D-2 ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 270 209-218 ။ [PubMed]
ကာဣန SB, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK, Patel ကအက်စ်, Bristow L. , Kulagowski ဂျေ, et al ။ (2002) ။ D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်နှင့်ဝတ္ထု D2 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများ: ကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏အခန်းက္ပ။ ဂျေ neuroscience ။ 22 2977-2988 ။ [PubMed]
ကာဣန SB, Thomsen အမ်, ဂါဗြေလ KI, Berkowitz JS, ရွှေ LH, Koob gf, et al ။ (2007) ။ dopamine D1 အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်တွေမှာကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုမရှိခြင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 27 13140-13150 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2284-07.2007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cass WA, Zahniser ရော်ဘာ (1991) ။ ပိုတက်ဆီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers D2 dopamine တားစီး, ဒါပေမယ့် adenosine, striatal dopamine လွှတ်ပေးရေးအဲဒီ receptor-mediated တားစီး A1 မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျေ Neurochem ။ 57 147-152 ။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1991.tb02109.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cervo L. , Samanin R. (1995) ။ ကိုကင်းအေးစက်သောအရပ် preference ကို၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်အပေါ် dopaminergic နှင့် glutamatergic အဲဒီ receptor ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 673 242-250 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (94) 01420-M ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ချန်ဒရာ R. , Lenz JD, Gancarz လေး, Chaudhury ဃ, Schroeder GL, ဟန် MH ။ (2013) ။ နျူကလိယ် D1R ၏ Optogenetic တားစီးအာရုံခံ Tiam1 ၏ကင်း-mediated စည်းမျဉ်းပွောငျးလဲ accumbens ။ တပ်ဦး။ Mol ။ neuroscience ။ 24: 6-13 ။ Doi: 10.3389 / fnmol.2013.00013 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chang ကအယ်လ်, Karin အမ် (2001) ။ ကက်စကိတ်အချက်ပြနို့တိုက်သတ္တဝါတွေကမြေပုံ kinase ။ သဘာဝ 410 37-40 ။ Doi: 10.1038 / 35065000 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chausmer AL, အဲလ် GI, Rubinstein အမ်, အနိမျ့ MJ, ယူဆပါတယ် DK, Katz JL (2002) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေမှာကင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 163 54-61 ။ Doi: 10.1007 / s00213-002-1142-y က။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen ကဂျေ, Rusnak အမ်, Luedtke RR, Sidhu အေ (2004) ။ D1 dopamine အဲဒီ receptor အဆိုပါ ERK signal ကိုအဆငျ့ဆငျ့ကနေတဆင့် dopamine-သွေးဆောင် cytotoxicity mediates ။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ 279 39317-39330 ။ Doi: 10.1074 / jbc.M403891200 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chiodo LA က, Kapatos G. အ (1992) ။ မူလတန်း dissociated ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှု၌ဖော်ထုတ် mesencephalic dopamine အာရုံခံ၏အမြှေးပါးဂုဏ်သတ္တိများ။ synapses 11 294-309 ။ Doi: 10.1002 / syn.890110405 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Choi EY, Jeong ဃ, Park က KW, Baik JH (1999) ။ နှစ်ခု dopamine D2 receptors အားဖြင့်, G ပရိုတိန်း-mediated mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase activation ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Biophys ။ res ။ Community ။ 256 33-40 ။ Doi: 10.1006 / bbrc.1999.0286 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Congar P. , Bergevin အေ, Trudeau LE (2002) ။ D2receptors dopaminergic အာရုံခံအတွက်ကယ်လစီယမ်ရောက်လာခြင်းမှမြစ်အောက်ပိုင်းကတော့အတွင်းသို့ဖြစ်စဉ်ကိုတားစီး: K + လိုင်းများ၏ဆိုလို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 87 1046-1056 ။ [PubMed]
Czoty PW, တရားမျှတမှု JB, Jr. Howell ll (2000) ။ နိုးရှဉ့်မျောက်တွေကို microdialysis ကဆုံးဖြတ် extracellular dopamine အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 148 299-306 ။ Doi: 10.1007 / s002130050054 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Dal Toso R. , Sommer ခ, Ewert အမ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်အေ, Pritchett DB, Bach အေ။ (1989) ။ အဆိုပါ dopamine D2 အဲဒီ receptor: အခြားရွေးချယ်စရာ splicing ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နှစ်ခုမော်လီကျူးပုံစံများ။ EMBO ဂျေ 8 4025-4034 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Davis က C. , Levitan RD, Yilmaz Z. , Kaplan AS, Carter က JC, ကနေဒီ JL (2012) ။ genotype နှင့် sub-phenotypes: Bing ရောဂါနှင့် dopamine D2 အဲဒီ receptor အစာစားခြင်း။ prog ။ NeuroPsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 38 328-335 ။ Doi: 10.1016 / j.pnpbp.2012.05.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Davis က JF, Tracy AL, Schurdak JD, Tschöp MH, Lipton JW, Clegg DJ သမား, et al ။ (2008) ။ အစားအသောက်အဆီမွငျ့မားသောအဆင့်အတန်းမှ exposure ကြွက်များတွင် psychostimulant ဆုလာဘ်များနှင့် mesolimbic dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် attenuates ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 122 1257-1263 ။ Doi: 10.1037 / a0013111 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dearry အေ, Gingrich ဂျာ et al Falardeau P. , Fremeau RT ကို, Jr. ဘိတ် MD ။ (1990) ။ လူသားတစ်ဦး D1 dopamine အဲဒီ receptor များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇ၏မော်လီကျူးကိုယ်ပွားနှင့်စကားရပ်။ သဘာဝ 347 72-76 ။ Doi: 10.1038 / 347072a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de Vries တီဂျေ, Schoffelmeer AN, Binnekade R. , Raasøအိပ်ချ်, Vanderschuren LJ (2002) ။ cocaine- နှင့် dopamine D2 receptors ကကမကထပြုခဲ့ဘိန်းဖြူ-ရှာကြံအပြုအမူမှ Relapse အချိန်-မှီခိုနှင့်အမူအကျင့်ာင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Neuropsychopharmacology 26 18–26. doi: 10.1016/S0893-133X(01)00293-7. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de Vries တီဂျေ, Schoffelmeer AN, Binnekade R. , Vanderschuren LJ (1999) ။ IV မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးရေရှည်ဆုတ်ခွာအောက်ပါကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူကိုရှာကွဖို့မက်လုံးပေးဖြန်ဖြေ Dopaminergic ယန္တရားများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 143 254-260 ။ Doi: 10.1007 / s002130050944 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Drago ဂျေ, Gerfen CR, Lachowicz je, Steiner အိပ်ချ်, Hollon TR, မတ်ေတာသ PE, et al ။ (1994) ။ D1A dopamine receptors ချို့တဲ့တဲ့ Mutant mouse ကိုခုနှစ်တွင်ပြောင်းလဲ striatal function ကို။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 91 12564-12568 ။ Doi: 10.1073 / pnas.91.26.12564 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Drago ဂျေ, Gerfen CR, Westphal အိပ်ချ်, Steiner အိပ်ချ် (1996) ။ D1 dopamine အဲဒီ receptor-လစ်လပ် mouse ကို: အ striatum အတွက်ချက်ချင်း-အစောပိုင်းမျိုးဗီဇများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကိုထုတ်ဖော်ကင်း-သွေးဆောင်စည်းမျဉ်း။ neuroscience 74 813–823. doi: 10.1016/0306-4522(96)00145-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Farooqi, Bullmore အီး, Keogh ဂျေ, ဂေးလဒ်ဂျေ, O'Rahilly အက်စ်, ဖလက်ချာကို PC (2007) IS ။ Leptin striatal ဒေသများနှင့်လူ့စားအပြုအမူထိန်းညှိ။ သိပ္ပံ 317 1355 ။ Doi: 10.1126 / science.1144599 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fasano အက်စ်, D'Antoni အေ, Orban ကို PC, Valjent အီး, Putignano အီး, Vara အိပ်ချ်, et al ။ (2009) ။ Ras-guanine ဘေ့-releasing အချက် 1 (Ras-GRF1) ကိုကင်းဖို့ striatum နှင့်ရေရှည်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက်အချက်ပြ extracellular signal ကို-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinase (ERK) ၏ activation ထိန်းချုပ်သည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 66 758-768 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2009.03.014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖာဂူဆန်သည် SM, Eskenazi ဃ, Ishikawa အမ်, Wanat MJ, Phillips က PE သည် Dong Y. , et al ။ (2011) ။ ယာယီအာရုံခံတားစီးာင်းအတွက်သွယ်ဝိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်ဖော်ပြသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 14 22-24 ။ Doi: 10.1038 / nn.2703 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fetissov SO, Meguid MM, Sato တီ, Zhang က LH (2002) ။ ပိန်နှင့်အဝလွန် Zucker နှုန်းထားများနှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ hypothalamus အတွက် dopaminergic receptors ၏ expression ။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol ။ 283 905-910 ။ [PubMed]
Figlewicz DP, Bennett က JL, Aliakbari အက်စ်, Zavosh အေ, Sipols AJ (2008) ။ အင်ဆူလင်ကြွက်များတွင်စူးရှသော sucrose စားသုံးမှုနှင့် sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချဖို့ကွဲပြားခြားနားသော CNS က်ဘ်ဆိုက်များမှာဆောင်ရွက်သည်။ နံနက်။ ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ Integrated ။ comp ။ Physiol ။ 295 R388-R394 ။ Doi: 10.1152 / ajpregu.90334.2008 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Figlewicz DP, အီဗန် SB, Murphy ကဂျေ, Hoen အမ်, Baskin DG (2003) ။ ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာ / substantia nigra (VTA / SN) တွင်အင်ဆူလင်နှင့် leptin များအတွက် receptors ၏ expression ။ ဦးနှောက် Res ။ 964 107–115. doi: 10.1016/S0006-8993(02)04087-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fuchs RA, Tran-ငုယင် LT, Weber နဲ့ SM, Khroyan တီဗီ, Neisewander JL (2002) ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူပေါ်နှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်အပေါ် 7-Oh-DPAT ၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 72 623–632. doi: 10.1016/S0091-3057(02)00731-1. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fulton အက်စ်, Pissios P. , Manchon RP, Stiles L. , ဖရန့်အယ်လ်, Pothos မာခ်, et al ။ (2006) ။ အဆိုပါ mesoaccumbens dopamine လမ်းကြောင်း၏ Leptin စည်းမျဉ်း။ အာရုံခံဆဲလျ 51 811-822 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2006.09.006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Girault ဂျေအေ (2012) ။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် neurotransmission ပေါင်းစပ်။ Adv ။ Exp ။ Med ။ Biol ။ 970 407–429. doi: 10.1007/978-3-7091-0932-8_18. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂိုး BB, Zweifel LS (2013) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor အချက်ပြ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာသဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 33 8640-8649 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5532-12.2013 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gorwood P. , Le Strat Y. , Ramoz N. , Dubertret C. , Moalic JM, Simonneau အမ် (2012) ။ dopamine receptors နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏မျိုးရိုးဗီဇ။ Hum ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 131 803-822 ။ Doi: 10.1007 / s00439-012-1145-7 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
goto Y. ရေ့ AA ကို (2005) ။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ်။ neuroscience ။ 8 805-812 ။ Doi: 10.1038 / nn1471 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
goto Y. , Otani အက်စ်, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို (2007) ။ အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင့်: dopamine လွှတ်ရာ yin နှင့် yang ။ Neuropharmacology 53 583-587 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2007.07.007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Floresco SB, Goto Y. , Lodge DJ သမား (2007) ။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏စည်းမျဉ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 30 220-227 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2007.03.003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယူဆပါတယ် DK, Zhang က YA, Bouvier C. , Zhou QY, ဂျွန်ဆင် RA, Allen ကအယ်လ်, et al ။ (1991) ။ အကွိမျမြားစှာလူ့ D5 dopamine အဲဒီ receptor ဗီဇ: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အဲဒီ receptor နှစ်ယောက် pseudogenes ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 88 9175-9179 ။ Doi: 10.1073 / pnas.88.20.9175 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Haber SN, Ryoo အိပ်ချ်, ကော့စီ, Lu ကဒဗလျူ (1995) ။ အဆိုပါ D2 အဲဒီ receptor များအတွက် mRNA နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်, tyrosine hydroxylase နှင့် calbindin immunoreactivity: မျောက်တွေကို midbrain dopaminergic အာရုံခံ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး mRNA ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 362 400-410 ။ Doi: 10.1002 / cne.903620308 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Halpern CH, Tekriwal အေ, Santollo ဂျေ, Keating JG, Wolf ကဂျာ Daniels ဃ (2013) ။ နျူကလိယအားဖြင့်မူးရူးစား၏ Amelioration ကြွက်တွေမှာ shell ကိုနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ D2 အဲဒီ receptor မော်ဂျူကပါဝင်ပတ်သက် accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 33 7122-7129 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3237-12.2013 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hemmings HC, Jr. Greengard P. , Tung HYL, Cohen ကို P. (1984a) ။ DARPP-32 တစ် dopamineregulated အာရုံခံ phosphoprotein, ပရိုတိန်း phosphatase-1 တစ်အစွမ်းထက် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ 310 503-505 ။ Doi: 10.1038 / 310503a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hemmings HC, Jr. Nairn AC အ, Greengard P. (1984b) ။ DARPP-32 တစ် dopamine- နှင့် adenosine 30: 50- monophosphate-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအာရုံခံ phosphoprotein ။ II ကို။ DARPP-32 နှင့် phosphatase inhibitor 1 ၏ phosphorylation ၏ kinetics ၏နှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ 259 14491-14497 ။ [PubMed]
ဟင်နရီ DJ သမား, ဂရင်း, MA, အဖြူရောင် FJ (1989) ။ အဆိုပါ mesoaccumbens dopamine စနစ်ကိုကင်းများ၏ Electrophysiological သက်ရောက်မှု: ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှု။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 251 833-839 ။ [PubMed]
Hikida တီ, Kimura K. , Wada N. , Funabiki K. , Nakanishi အက်စ် (2010) ။ ဆုချမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် striatal လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic ဂီယာနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူများ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ 66 896-907 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2010.05.011 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hommel JD, Trinko R. , Sears RM, Georgescu ဃ, လျူ ZW, Gao xB, et al ။ (2006) ။ midbrain dopamine အာရုံခံအတွက်အချက်ပြ Leptin အဲဒီ receptor နို့တိုက်ကျွေးရေးထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ 51 801-810 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2006.08.023 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hornykiewicz O. (1966) ။ Dopamine (3-hydroxytyramine) နှင့်ဦးနှောက် function ကို။ Pharmacol ဗျာ 18 925-964 ။ [PubMed]
Huang က XF, Zavitsanou K. , Huang က X တို့မှာ, et al ယု Y. , ဝမ်အိပ်ချ်, Chen ကအက်ဖ်။ (2006) ။ Dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် D2 အဲဒီ receptor နာတာရှည်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ-incuded အဝလွန်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ကြွက်တွေမှာထု binding ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 175 415-419 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2006.08.034 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hubner သမဝါယမ, Moreton je (1991) ။ ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ရွေးချယ် D1 နှင့် D2 dopamine ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 105 151-156 ။ Doi: 10.1007 / BF02244301 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဒေါ့မွန်အမ်, Unterwald EM (2002) ။ D1 dopamine အဲဒီ receptor: ကင်းအရေးယူမှုတစ်ခု putative neurochemical နှင့်အမူအကျင့် link ကို။ ဂျေဆဲလ်။ Physiol ။ 191 17-27 ။ Doi: 10.1002 / jcp.10078 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hurd YL, Weiss အက်ဖ်, Koob gf ၎င်း, NE, Ungerstedt U. (1989) ။ ကြွက်နျူကလိယထဲမှာကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့် extracellular dopamine လျတ် accumbens: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 498 199–203. doi: 10.1016/0006-8993(89)90422-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျွန်ဆင် pm တွင်, Kenny PJ (2010) ။ အဝလွန်ကြွက်များတွင် addictionlike ဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် compulsive စား Dopamine D2 receptors ။ နတ်။ neuroscience ။ 13 635-641 ။ Doi: 10.1038 / nn.2519 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, Duffy P. (1990) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် extracellular dopamine အပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ကင်းကုသမှု effect ။ synapses548-58 ။ Doi: 10.1002 / syn.890050104 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, ပီယပ် RC, Cornish- ဂျေ, Sorg BA (1998) ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာနှင့် relapse အတွက်ာင်းတစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေ Psychopharmacol ။ 12 49-53 ။ Doi: 10.1177 / 026988119801200107 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, Volkow ND (2005) ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 162 1403-1413 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.8.1403 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Karasinska JM, ဂျော့ခ်ျ SR, Cheng R ကို, O'Dowd BF (2005) ။ dopamine D1 နှင့် D3 receptors ၏ပယ်ဖျက်ခြင်း differential အလိုအလျောက်အပြုအမူများနှင့်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု, ဆုလာဘ်များနှင့် CREB phosphorylation သက်ရောက်သည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 22 1741-1750 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2005.04353.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Karlsson RM, Hefner KR, Sibley DR, ကေတီဟုမ်းအေ (2008) ။ ကိုကင်း locomotor ာင်း dopamine D1 နှင့် D5 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်များ၏နှိုင်းယှဉ်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 200 117-127 ။ Doi: 10.1007 / s00213-008-1165-0 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kebabian JW, Calne DB (1979) ။ dopamine များအတွက်အကွိမျမြားစှာ receptors ။ သဘာဝ 277 93-96 ။ Doi: 10.1038 / 277093a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kebabian JW, Greengard P. (1971) ။ Dopamine-အထိခိုက်မခံ adenyl cyclase: Synaptic ဂီယာအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ 174 1346-1349 ။ Doi: 10.1126 / science.174.4016.1346 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကနေဒီ RT ကို, ဂျုံးစ် SR, Wightman RM (1992) ။ ကြွက် striatal ချပ်ထဲမှာ dopamine autoreceptor သက်ရောက်မှုများ dynamic လေ့လာရေး။ ဂျေ Neurochem ။ 59 449-455 ။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1992.tb09391.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kenny PJ (2011) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 12 638-651 ။ Doi: 10.1038 / nrn3105 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Khroyan တီဗီ, Barrett-Larimore RL, Rowlett JK, Spealman RD (2000) ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူမှ relapse အတွက် Dopamine D1- နှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor ယန္တရားများ: ရွေးချယ်ရန်နှင့် agonists ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 294 680-687 ။ [PubMed]
Khroyan တီဗီ, Platt DM, Rowlett JK, Spealman RD (2003) ။ Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor agonists နှင့်ရန်ခြင်းဖြင့်ရှာကြံကင်းဖို့ relapse ၏ attenuation ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 168 124-131 ။ Doi: 10.1007 / s00213-002-1365-y က။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Kim က KS, Yoon နှစ်, Lee က HJ, Yoon အက်စ်ကင်မ် S.-Y. , ရှင် SW, ။ (2010) ။ dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်များတွင်အချက်ပြ Enhanced hypothalamic leptin ။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ 285 8905-8917 ။ Doi: 10.1074 / jbc.M109.079590 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကင်မ် SJ ကင်မ် MY, Lee က EJ, Ahn YS, Baik JH (2004) ။ အဆိုပါ dopamine D2 အဲဒီ receptor နှစ်ခု isoforms နေဖြင့်နိုင်ငံတကာနှင့် mitogen-activated ပရိုတိန်း kinase activation ၏ကွဲပြားစည်းမျဉ်း။ Mol ။ Endocrinol ။ 18 640-652 ။ Doi: 10.1210 / me.2003-0066 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kim က SY, Choi KC, Chang က MS ကင်မ် MH ကင်မ် SY, Na YS, et al ။ (2006) ။ အဆိုပါ dopamine D2 အဲဒီ receptor extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase နှင့် Nurr1 activation မှတဆင့် dopaminergic အာရုံခံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience ။ 26 4567-4576 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5236-05.2006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kim က SY, Lee က HJ ကင်မ် yn, Yoon အက်စ်, Lee က je, Sun ကဒဗလျူ, et al ။ (2008) ။ Striatal-သန့်စင်ပရိုတိန်း tyrosine phosphatase extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase အချက်ပြမှတဆင့် dopaminergic အာရုံခံဖှံ့ဖွိုးတိုးတထိန်းညှိ။ Exp ။ Neurol ။ 214 69-77 ။ Doi: 10.1016 / j.expneurol.2008.07.014 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Konner AC အ, Hess အက်စ်, Tovar အက်စ်, Mesaros အေ, Sanchez-Lasheras et al C. အမြဲ N. ။ (2011) ။ စွမ်းအင် homeostasis များ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် catecholaminergic အာရုံခံအတွက်အင်ဆူလင်အချက်ပြဘို့အခန်းက္ပ။ cell Metab ။ 13 720-728 ။ Doi: 10.1016 / j.cmet.2011.03.021 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kuribara အိပ်ချ်, Uchihashi Y. (1993) ။ ကြွက်တွေမှာလူနာလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာ Dopamine ရန်, စိတ်ကြွဆေး sensitive ကသော်လည်းမကင်းာင်းတားစီးနိုင်ပါတယ်။ ဂျေ Pharm ။ Pharmacol ။ 45 1042-1045 ။ Doi: 10.1111 / j.2042-7158.1993.tb07177.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Labouèbe G. အ, လျူအက်စ်, Dias C. , Zou အိပ်ချ်, Wong က JC, Karunakaran အက်စ်, et al ။ (2013) ။ အင်ဆူလင် endocannabinoids မှတဆင့် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ induces နတ်။ neuroscience ။ 16 300-308 ။ Doi: 10.1038 / nn.3321 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lacey MG, Mercury NB မြောက်ပိုင်း RA (1987) ။ Dopamine ဟာကြွက် substantia nigra zona compacta အများ၏အာရုံခံအတွက်ပိုတက်စီယမ် conduction တိုးမြှင့်ဖို့ D2 receptors အပေါ်ပြုမူ။ ဂျေ Physiol ။ (Lond ။ ) 392 397-416 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lacey MG, Mercury NB မြောက်ပိုင်း RA (1988) ။ ကြွက် substantia nigra အာရုံခံအတွက် GABAB နှင့် dopamine D2 receptors များက activated ဟာပိုတက်စီယမ် conduction တိုးတွင်။ ဂျေ Physiol ။ (Lond ။ ) 401 437-453 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lobo MK (2010) ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ 330 385-390 ။ Doi: 10.1126 / science.1188472 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lobo MK, Nestler EJ (2011) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် striatal balancing လုပ်ရပ်: တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ တပ်ဦး။ Neuroanat ။ 5: 41 ။ Doi: 10.3389 / fnana.2011.00041 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Luo အဘိဓါန် Y. , Kokkonen GC, ဝမ် X တို့မှာ, Neve Ka, Roth GS (1998) ။ D2 dopamine receptors အထိခိုက်မခံ, G ပရိုတိန်းနှင့်ကြွက် C6-D2L glioma ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ Ras-ပါဝင်ပတ်သက် ERK နှင့် SAP / jnk လမ်းကြောင်း toxin- ကြက်ညှာချောင်းဆိုးမှတဆင့် mitogenesis လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဂျေ Neurochem။ 71 980-990 ။ Doi: 10.1046 / j.1471-4159.1998.71030980.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lüscher C. , Malenka RC (2011) ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကနေပတ်လမ်းအသစ်ပြန်ပြုပြင်ရန်။ အာရုံခံဆဲလျ 69 650-663 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2011.01.017 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, Broft အေ, Foltin RW, Slifstein အမ်, Hwang DR, Huang က Y. , et al ။ (2004) ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့် striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက် d2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: ကင်း-ရှာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ Neuropsychopharmacology 29 1190-1202 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300420 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mattingly BA, ဟတ် TC, Lim ကကေ, Perkins C. (1994) ။ dopamine: D ၏ရွေးချယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း - နဲ့ D, -receptors ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပိတ်ဆို့မထားဘူး။ Psychopharmacology 114 239-242 ။ Doi: 10.1007 / BF02244843 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မိုင်းလုပ်သား ll, Drago ဂျေ, ချိန်ဘာလိန်လေး, ဒိုနိုဗန်ဃ, Uhl ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (1995) ။ ကိုကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကို inD1 အဲဒီ receptor deficientmice ထိန်းသိမ်းထား။ Neuroreport62314-2316 ။ Doi: 10.1097 / 00001756-199511270-00011 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Missale C. , Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber အမ်, caron MG (1998) ။ Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol ။ ဗျာ 78 189-225 ။ [PubMed]
Montmayeur JP, Bausero P. , Amlaiky N. , Maroteaux L. , Hen R. , Borrelli အီး (1991) ။ မောက် D2 dopamine အဲဒီ receptor isoforms ၏ differential စကားရပ်။ FEBS လက်တ။ 278 239-243 ။ Doi: 10.1016 / 0014-5793 (91) 80125-M ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Moyer RA, ဝမ်ဃ, Papp AC အ, Smith က RM, Duqu L. , mash, DC, et al ။ (2011) ။ လူ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor ၏အခြားရွေးချယ်စရာ splicing ထိခိုက် Intronic polymorphic ကင်းအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ Neuropsychopharmacology 36 753-762 ။ Doi: 10.1038 / npp.2010.208 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nazarian အေ, Russo SJ, Festa ED, Kraish အမ်, Quinones-Jenab V. (2004) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေးများတွင် D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 63 295-299 ။ Doi: 10.1016 / j.brainresbull.2004.03.004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Neisewander JL, Fuchs RA, O'Dell LE, Khroyan တီဗီ (1998) ။ intraaccumbens ကင်းပြုတ်ရည်များကထုတ်လုပ် dopamine D23390 အဲဒီ receptor ထေိုနှင့်ရွေ့လျားအပေါ် SCH-1 ၏ဆိုးကျိုးများ။ synapses 30 194–204. doi: 10.1002/(SICI)1098-2396(199810)30:2<194::AID-SYN9>3.0.CO;2-7. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Neisewander JL, O'Dell LE, Redmond JC (1995) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျား reverse ကြောင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ရန်ကသိမ်းပိုက် dopamine အဲဒီ receptor Subtype ၏ Localization ။ ဦးနှောက် Res ။ 671 201-212 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (94) 01317-B က။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nestler EJ, Carlezon WA, Jr (2006) ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် mesolimbic dopamine ဆုလာဘ် circuit ကို။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 59 1151-1159 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.09.018 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nishi အေ, Snyder G. အ L ကို, Greengard P. (1997) ။ dopamine အားဖြင့် DARPP-32 phosphorylation ၏ Bidirectional စည်းမျဉ်း။ ဂျေ neuroscience ။ 17 8147-8155 ။ [PubMed]
-Norman AB, norman MK, ခန်းမ JF, Tsibulsky VL (1999) ။ တံခါးခုံ Priming: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ reinstatement တစ်ဝတ္ထုအရေအတွက်အတိုင်းအတာ။ ဦးနှောက် Res ။ 831 165–174. doi: 10.1016/S0006-8993(99)01423-7. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Onali P. , Oliansa MC, Bunse ခ (1988) ။ adenosine A2 နှင့် dopamine autoreceptors ရန်ကြွက် striatal synaptosomes အတွက် tyrosine hydroxylase လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 456 302–309. doi: 10.1016/0006-8993(88)90232-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Overton PG, Clark ကဃ (1997) ။ midbrain dopaminergic အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်ကွဲ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 25 312–334. doi: 10.1016/S0165-0173(97)00039-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Palmiter RD (2007) ။ dopamine နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူတစ်ခုဇီဝကမ္မသက်ဆိုင်ရာဖျန်ဖြေလား? ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 30 375-381 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2007.06.004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Parsons LH, တရားမျှတမှု JB, Jr (1993) ။ နျူကလီးယပ် accumbens, ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ dorsal raphe နျူကလိယအတွက် serotonin နဲ့ dopamine ာင်း။ ဂျေ Neurochem ။ 61 1611-1619 ။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1993.tb09794.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pascoli V. , Besnard အေ, Herve ဃ, စာမျက်နှာများ C. , et al Heck N. , Girault ဂျာ။ (2011) ။ NR2B ၏သိသိ adenosine monophosphate-လွတ်လပ်သော tyrosine phosphorylation ကင်း-သွေးဆောင် extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase activation mediates ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 69 218-227 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2010.08.031 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရှင်ပေါလုအက်စ်, Nairn AC အ, ဝမ် P. , Lombroso PJ (2003) ။ အဆိုပါ tyrosine phosphatase အဆင့်၏ NMDA-mediated activation ERK အချက်ပြ၏ကြာချိန်ကိုထိန်းညှိ။ နတ်။ neuroscience ။634-42 ။ Doi: 10.1038 / nn989 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pettit HO, Ettenberg အေ, Bloom FE, Koob gf (1984) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ၏အဗဒ္ဒုန်ရွေးချယ်ကြွက်များတွင်ကင်းသော်လည်းမဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates accumbens ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 84 167-173 ။ Doi: 10.1007 / BF00427441 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pettit အိပ်ချ်, အိုတရားမျှတရေး JBJ (1989) ။ အတွက် Vivo microdialysis နေဖြင့်လေ့လာခဲ့အတိုင်းနျူကလိယအတွက် Dopamine ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း accumbens ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 34 899–904. doi: 10.1016/0091-3057(89)90291-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pothos မာခ်, Davila V. , Sulzer ဃ (1998) ။ midbrain dopamine အာရုံခံနှင့် quantal အရွယ်အစားမော်ဂျူထံမှ quanta ၏ Presynaptic အသံဖမ်း။ ဂျေ neuroscience ။ 18 4106-4118 ။ [PubMed]
Pozzi L. , Håkansson K. , Usiello အေ, Borgkvist အေ, Lindskog အမ်, Greengard P. , et al ။ (2003) ။ mouse ကို dorsal striatum အတွက် ERK1 / 2, CREB နှင့်ဆတ်-1 phosphorylation ၏ပုံမှန်နှင့် atypical Anti-psychotic အားဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်စည်းမျဉ်း။ ဂျေ Neurochem ။ 86 451-459 ။ Doi: 10.1046 / j.1471-4159.2003.01851.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (1993) ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 18 247-291 ။ Doi: 10.1016 / 0165-0173 (93) 90013-P ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Salamone JD ကော်ရဲရားအမ် (2013) ။ Dopamine နှင့်အစားအစာစွဲ: အရေးတကြီးလိုအပ်နေသောအဘိဓာန်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 73 e15-e24 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.09.027 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Salamone JD, မာဟန် K. , ရော်ဂျာအက်စ် (1993) ။ Ventrolateral striatal dopamine လျော့ကျကြွက်များတွင်တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အစားအစာကိုင်တွယ်အယှက်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 44 605-610 ။ Doi: 10.1016 / 0091-3057 (93) 90174-R ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schmidt က HD ကို, ပီယပ် RC (2010) ။ အချိုမှုဂီယာအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptations: တဏှာနှင့်စွဲလမ်းများအတွက်အလားအလာကုထုံးပစ်မှတ်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1187 35-75 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.2009.05144.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (2007) ။ အမူအကျင့် dopamine အချက်ပြမှုများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 30 203-210 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2007.03.007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (2012) ။ dopamine ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 23 229-238 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2012.11.012 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကိုယ်ပိုင် DW, Barnhart WJ, Lehman DA, Nestler EJ (1996) ။ D1- နှင့် D2 ကဲ့သို့ dopamine အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ဆန့်ကျင်ဘက်မော်ဂျူ။ သိပ္ပံ 271 1586-1589 ။ Doi: 10.1126 / science.271.5255.1586 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sesack SR, Aoki C. , Pickel VM က (1994) ။ midbrain dopamine အာရုံခံနှင့်၎င်းတို့၏ striatal ပစ်မှတ်အတွက် D2 အဲဒီ receptor-တူသော immunoreactivity ၏ Ultrastructural localization ။ ဂျေ neuroscience ။ 14 88-106 ။ [PubMed]
Shaham Y. , Shalev U. , Lu ကအယ်လ်, De ကျေးအိပ်ချ်, Stewart ကဂျေ (2003) ။ သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်: မူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 168 3-20 ။ Doi: 10.1007 / s00213-002-1224-x ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shiflett မဂ္ဂါဝပ်, Balleine BW (2011) ။ ဆာသင်ယူမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့ striatum အတွက်အချက်ပြ ERK ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 218 240-247 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2010.12.010 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shippenberg TS, Heidbreder C. (1995) ။ pharmacological နှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ: ကိုကင်းများ၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 273 808-815 ။ [PubMed]
sim HR, Choi ty, Lee က HJ, Kang EY, Yoon အက်စ်, ဟန် PL, et al ။ (2013) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ plasticity အတွက် dopamine D2 receptors ၏အခန်းက္ပ။ နတ်။ Community ။41579 ။ Doi: 10.1038 / ncomms2598 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အသေးစား DM, ဂျုံးစ်-Gotman အမ်, Dagher အေ (2003) ။ dorsal striatum အတွက်နို့တိုက်ကျွေးရေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျန်းမာလူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်မုန့်ညက်သာယာသော ratings နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuroimage 19 1709–1715. doi: 10.1016/S1053-8119(03)00253-2. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က JW, Fetsko LA က, Xu R. , ဝမ် Y. (2002) ။ Dopamine D2L အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်မော်ဖင်းအကိုက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းသင်ယူမှုအတွက်လိုငွေပြမှုဖော်ပြရန်။ neuroscience 113 755–765. doi: 10.1016/S0306-4522(02)00257-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sokoloff P. , Giros ခ, Martres အမတ်, Bouthenet ML, Schwartz JC (1990) ။ neuroleptics များအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်ဝတ္ထု dopamine အဲဒီ receptor (D3) ၏မော်လီကျူးကိုယ်ပွားနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ သဘာဝ 347 146-151 ။ Doi: 10.1038 / 347146a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spealman RD, Barrett-Larimore RL, Rowlett JK, Platt DM, Khroyan တီဗီ (1999) ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူမှ relapse ၏ Pharmacological နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဌာန်းခွင့်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 64 327–336. doi: 10.1016/S0091-3057(99)00049-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spyraki C. , Fibiger HC, Phillips က AG က (1982) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအေးစက်: neuroleptics နှင့် 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှုမရှိခြင်း။ ဦးနှောက် Res ။ 253 195–203. doi: 10.1016/0006-8993(82)90686-2. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stice အီး, Spoor အက်စ်, Bohon C. , အသေးစား DM (2008a) ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစားအစာမှတုံး striatal တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေး TaqIA A1 allele အားဖြင့်တည်းဖြတ်သည်။ သိပ္ပံ 322 449-452 ။ Doi: 10.1126 / science.1161550 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stice အီး, Spoor အက်စ်, Bohon C. , Veldhuizen အမ်, အသေးစား DM (2008b) ။ အဝလွန်ခြင်းမှအစားအစာစားသုံးမှုနှင့်မျှော်လင့်စားသုံးမှုကနေဆုလာဘ်၏ relation: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ magnretic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 117 924-935 ။ Doi: 10.1037 / a0013600 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stice အီး, Yokum အက်စ်, Zald ဃ, Dagher အေ (2011) ။ Dopamine-based ဆုလာဘ် circuitry Response, မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ကျော်။ Curr ။ ထိပ်တန်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။681-93 ။ Doi: 10.1007 / 7854_2010_89 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steketee JD (1998) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာလုပ်ကွက်သို့ SCH 23390 ၏ injection ကိုကင်းဖို့ neurochemical ပေမယ့်အမူအကျင့်ကိုမအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။969-76 ။ [PubMed]
Steketee JD, Kalivas PW (2011) ။ လိုသောမူးယစ်ဆေး: မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှအမူအကျင့်ထိခိုက်စေ relapse ။ Pharmacol ။ ဗျာ 63 348-365 ။ Doi: 10.1124 / pr.109.001933 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sunahara RK, ဂွမ် HC, O'Dowd BF, Seeman P. , Laurier LG က, Ng သည် G. အ, et al ။ (1991) ။ D5 ထက် dopamine အဘို့အမြင့်မားဆှဖှေဲ့နှင့်အတူလူသားတစ်ဦး dopamine D1 အဲဒီ receptor များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇ၏ကိုယ်ပွား။ သဘာဝ 350 614-619 ။ Doi: 10.1038 / 350614a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sweatt JD (2004) ။ Synaptic plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက် Mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 14 311-317 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2004.04.001 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tanabe LM, Suto N. , Creekmore အီး, Steinmiller CL, Vezina P. (2004) ။ အဆိုပါ VTA အတွက် D2 dopamine receptors ၏ပိတ်ဆို့စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုသက်ဝင်သည့် locomotor တစ်ကြာရှည်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 15 387-395 ။ Doi: 10.1097 / 00008877-200409000-00013 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Thanos PK, Volkow ND, Freimuth P. , Umegaki အိပ်ချ်, Ikari အိပ်ချ်, Roth G. အ, et al ။ (2001) ။ dopamine receptors ၏ Overexpression အရက် Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ဂျေ Neurochem ။ 78 1094-1103 ။ Doi: 10.1046 / j.1471-4159.2001.00492.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သောမတ်စ် GM က, Huganir RL (2004) ။ MAPK အဆငျ့ဆငျ့အချက်ပြခြင်းနှင့် Synaptic plasticity ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။5173-183 ။ Doi: 10.1038 / nrn1346 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သောမတ်စ် MJ, Beurrier C. , Bonci အေ, Malenka RC (2001) ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ accumbens: ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးအာရုံကြော Correlate ။ နတ်။ neuroscience ။41217-1223 ။ Doi: 10.1038 / nn757 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သောမတ်စ် MJ, Kalivas PW, Shaham Y. (2008) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်ကိုကင်းစွဲအတွက် Neuroplasticity ။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 154 327-342 ။ Doi: 10.1038 / bjp.2008.77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tritsch NX, Sabatini BL (2012) ။ cortex နဲ့ striatum အတွက် Synaptic ဂီယာ၏ Dopaminergic မော်ဂျူ။ အာရုံခံဆဲလျ 76 33-50 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2012.09.023 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ushijima ဗြဲ, Carino အေ, Horita အေ (1995) ။ ကြွက်များတွင်ကင်း၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက် D1 နှင့် D2 dopamine စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 52 737-741 ။ Doi: 10.1016 / 0091-3057 (95) 00167-ဦး။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Usiello အေ, Baik JH, Rouge-ပိုတငျးအက်ဖ်, Picetti R. , Dierich အေ, LeMeur အမ်။ (2000) ။ dopamine D2 receptors ၏နှစ်ခု isoforms ၏ကွဲပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ သဘာဝ 408 199-202 ။ Doi: 10.1038 / 35041572 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Valjent အီး, Corvol JC, စာမျက်နှာများ C. , Besson MJ, Maldonado R. , Caboche ဂျေ (2000) ။ ဂုဏ်သတ္တိများ cocainerewarding များအတွက် extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase အဆငျ့ဆငျ့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 20 8701-8709 ။ [PubMed]
Valjent အီး, Pascoli V. , Svenningsson P. , ပေါလုအက်စ်, Enslen အိပ်ချ်, Corvol JC, et al ။ (2005) ။ ပရိုတိန်း phosphatase အဆငျ့ဆငျ့၏စည်းမျဉ်း convergence dopamine နဲ့အချိုမှုအချက်ပြသည့် striatum အတွက် ERK activate လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 102 491-496 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0408305102 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vanderschuren LJ, Kalivas PW (2000) ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာမှ ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 151 99-120 ။ Doi: 10.1007 / s002130000493 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vanover Ke, Kleven က MS, Woolverton WL (1991) ။ အဆိုပါ: D (1) dopamine ရန် SCH-39166 နှင့် A-66359 နှင့်အတူမျောက်တွေကိုအတွက်ကိုကင်းများ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။2151-159 ။ Doi: 10.1097 / 00008877-199104000-00007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ဗန် Tol နာရီ, Bunzow JR, ဂွမ် HC, Sunahara RK, Seeman P. , Niznik HB ။ (1991) ။ အဆိုပါ antipsychotic clozapine အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူလူသားတစ်ဦး dopamine D4 အဲဒီ receptor များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇ၏ကိုယ်ပွား။ သဘာဝ 350 610-614 ။ Doi: 10.1038 / 350610a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R. , Logan ဂျေ, Schlyer DJ သမား။ (1993) dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses 14 169-177 ။ Doi: 10.1002 / syn.890140210 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Baler RD (2011) ။ ဆုလာဘ်, dopamine နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်မှု: အဝလွန်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ 15: 37-46 ။ Doi: 10.1016 / j.tics.2010.11.001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Volkow ND, ဝမ် GJ, Begleiter အိပ်ချ်, Porjesz ခ, မုဆိုး JS, Telang အက်ဖ်။ (2006) ။ အရက်မိသားစုများ၏ထိခိုက်အင်္ဂါများ၌ dopamine D2 receptors ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်း: တတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်အချက်များ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63 999-1008 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.63.9.999 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Volkow ND, ဝမ် GJ, Telang အက်ဖ်, မုဆိုး JS, Thanos PK, Logan ဂျေ။ (2008) ။ တတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးအချက်များ: အနိမျ့ dopamine striatal D2 receptors အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal ဇီဝြဖစ်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ Neuroimage 42 1537-1543 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2008.06.002 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် C. , ဘာ့ DC က, ယန် R. , Macey က TA, Neve Ka (2005) ။ အဲဒီ receptor tyrosine kinases ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-မှီခို transactivation ကကမကထပြုခဲ့ mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases ၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor ဆွ။ ဂျေ Neurochem ။ 93 899-909 ။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.2005.03055.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan ဂျေ, Pappas ရော်ဘာ, Wong ကမှန် CT, Zhu ဒဗလျူ, et al ။ (2001) ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 357 354–357. doi: 10.1016/S0140-6736(00)03643-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် GJ, Volkow ND, Thanos PK, မုဆိုး JS (2009) ။ ဦးနှောက် dopamine လမ်းကြောင်း၏ imaging: အဝလွန်ကိုနားလည်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ ဂျေစွဲ။ Med ။38–18. doi: 10.1097/ADM.0b013e31819a86f7. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝလေဝလေ GI, ခန်းမ DA, သတိပေးခကျြကိုအေ, ထူးဆန်း PG, Proud CG (1998) ။ microtubule- ဆက်စပ်ပရိုတိန်း kinase (Erk) နှင့် p70, D6 dopamine receptors အားဖြင့် S2 kinase ၏ activation ။ ဂျေ Neurochem ။ 70 2139-2146 ။ Doi: 10.1046 / j.1471-4159.1998.70052139.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Welter အမ်, Vallone ဃ, Samad က TA, Meziane အိပ်ချ်, Usiello အေ, Borrelli အီး (2007) ။ dopamine D2 receptors ၏မရှိခြင်းကိုကင်းများက activated ဦးနှောက် circuitries ကျော်တစ်ဦး inhibitory ထိန်းချုပ်မှု unmasks ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 104 6840-6845 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0610790104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
White က FJ, Joshi အေ, Koeltzow TE, Hu X.-T. (1998) ။ Dopamine အဲဒီ receptor ရန်ကင်းအကဲဆတ်ခြင်း induction ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ Neuropsychopharmacology 18 26–40. doi: 10.1016/S0893-133X(97)00093-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
White က FJ, ဝမ် RY (1984) ။ နာတာရှည် D-စိတ်ကြွဆေးကုသမှုအောက်ပါ A10 dopamine autoreceptor subsensitivity များအတွက် Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 309 283–292. doi: 10.1016/0006-8993(84)90594-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2004) ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။5483-494 ။ Doi: 10.1038 / nrn1406 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Woolverton WL (1986) ။ မျောက်တွေကိုအားဖြင့်ကိုကင်းနှင့်အ piribedil ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်တစ်ဦး D1 နှင့် D2 dopamine ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 24 531–535. doi: 10.1016/0091-3057(86)90553-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Xu အမ်, Hu XT, Cooper က, DC, Graybiel လေး, ဖြူ FJ, Tonegawa အက်စ် (1994) ။ dopamine D1 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင် hyperactivity နှင့် dopamine-mediated neurophysiological သက်ရောက်မှုများပပျောက်ရေး။ ကလာပ်စည်း 79 945–955. doi: 10.1016/0092-8674(94)90026-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yoon အက်စ်, Baik JH (2013) ။ တစ်ဦး disintegrin နှင့် metalloprotease မှတဆင့် Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated epidermal growth factor receptor transactivation extracellular signal ကို-related kinase activation မှတဆင့် dopaminergic အာရုံခံဆဲလျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိန်းညှိ။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] Doi: 10.1074 / jbc.M113.461202 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yoon အက်စ်, Choi MH, Chang က MS, Baik JH (2011) ။ Wnt5a-dopamine D2 အဲဒီ receptor interaction က extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase (ERK) activation မှတဆင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိန်းညှိ။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ 286 15641-15651 ။ Doi: 10.1074 / jbc.M110.188078 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zahniser ရော်ဘာ, Goens ကို MB, Hanaway PJ, Vinych ဖက်စပ် (1984) ။ စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာအင်ဆူလင် receptors ၏စည်းမျဉ်း။ ဂျေ Neurochem ။ 42 1354-1362 ။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1984.tb02795.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
zhou QY, ယူဆပါတယ် DK, Thambi L. , Kushner ဂျာဗန် Tol နာရီ, Cone R. , et al ။ (1990) ။ လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက် D1 dopamine receptors ၏ကိုယ်ပွားနှင့်စကားရပ်။ သဘာဝ 347 76-80 ။ Doi: 10.1038 / 347076a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
zhou QY, Palmiter RD (1995) ။ Dopamine-deficientmice, ပြင်းထန်စွာ hypoactive adipsic ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, aphagic ။ ကလာပ်စည်း 83 1197–1209. doi: 10.1016/0092-8674(95)90145-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zito Ka, Vickers G. အ, ရောဘတ်, DC (1985) ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ kainic အက်ဆစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြတ်တောက်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 23 1029–1036. doi: 10.1016/0091-3057(85)90110-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]